2 Galvanised Steel Grating Steel plates connecting ready-plated steel. Rail corridors for drainage * Best Seller No.2. – ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ
Welded Steel Bar Grating (HotDip Galvanized) ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบจุ่มร้อนกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ
Welded Steel Bar Grating (HotDip Galvanized) For draining ditch Paved walkways
Manufacturers and distributors. Stainless steel galvanized steel drainage rack Use twist rod twist rod, non-slip twist, homogeneous to flat bar steel. Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastener
3. ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อม ผลิตโดยใช้เหล็กบิดเกลียว Twisted Rod หนา 6-8mm เพื่อผสานเหล็กแผ่นเข้าด้วยกันอย่างแข็งแรง และออกแบบให้ป้องกันการลื่นไถลไปในตัว จุดสำคัญอยู่ที่การเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันกับเหล็กแผ่น Flat bar โดยเชื่อมด้วยระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน (โปรดตรวจสอบงานเชื่อมเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนเชื่อม) รับประกันงานคุณภาพความแข็งแรงที่ลูกค้าต้องพิสูจน์ก่อนตัดสินใจ โดยพิจารณาจาก ขนาดช่องรูเล็กได้มาตราฐานเหมือนกัน รอยเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวทุกด้าน งานชุบซิงค์หนากว่า 75 ไมครอนได้ตามมาตรฐาน ทำให้แข็งแรงและทนทานต่อการสึกกร่อนได้นานกว่า งานชุบเร็วแบบบางและการเคลือบพ่นทาสีShancon Steel Gratings feature (Standard welding and plating thickness) 1. steel grille finished withacompany. Standard width2sizes 25 cm and 30 cm in case of customers need size 50x100cm. Can be applied to welding or placing 25cm two sheets together. In case you want to use the size 100x100cm can use4discs connected bya25 cm. Or if 60x100cm. Or 100x120cm. It can be applied to the composite sheet 30x100cm. Well 2. steel plate production grid withathickness of2sizes. It is 3mm. And 5mm. Thickness of 3mm steel sheet is designed to use less force than the lift car. In the case of the need to run the car through the truck from six wheels to ten wheels to large trailers. It is recommended to useathickness of 5mm. Because it is designed to be smaller and thicker, it hasastrength of over 25 tons.
3. Steel grating plate Manufactured using twisted rod twisted rod, 6-8mm thick, to combine steel plate strongly. And designed to prevent slipping in. The important point is to bond the flat bar withaCO2 / MIG system, which is electrically welded toahomogeneous steel. (Please check the welding work compared to manual welding). By considering Small hole size is standard. The melting is all on one side. Zinc-plated work more than 75 microns standard. Strong and resistant to erosion longer. Thin plating and spray coating
Best-Seller #2HDG. STEEL GRATING Galvanized steel grating.
Hotdip Galvanized Steel Bar Grating Steel Grating Use twist rod twist rod, non-slip, cohesive with flat bar with CO2 / MIG system, which is electrically welded toahomogeneous steel. Please check the welding work to compare with manual labor. Quality assurance work guaranteed. Customers must prove before deciding. By considering Small hole size is standard. The melting is all on one side. Zinc-plated work more than 75 microns standard. The strength and resistance to corrosion than
the general standard of drainage grating width of 25 cm and 30 cm , just prepare the design should accommodateawide range from 25.5 to 26.0 cm or 30.5 to 31.0 cm to. Buy all grids to put immediately.
Of manual dip, Galvanized Steel’s’ Hot Grating Specification The (3mm Thick Bar is. Vs The 5mm.) : Thick 3mm. Mesh, 40×100 -Vs- : Thick 5mm. Mesh, 30×100 1) iron drainage products. Standard size 25cm wide and 30cm long with 1 meter stock ready to send immediately. Every item of merchandise 2) The melting system is stronger than one. By automating the CO2 / MIG system, which is electrically welded, the steel melts homogeneously. The welded steel mesh is smooth and beautiful. And bonding strength than steel welding shop , 3) coated by galvanizing Hot dip Galvanizing thickness less than 75 microns.
According to ASTM A123, ASTM B6 (do not use rust / spray paint). Likeatypical ironmongery This makes it easier to weather corrosion than HDG plating.)
4) The best way to place steel bars and grilles Using less lightweight materials While still able to receive maximum force. It ensures that the welds. Structure and consistency
5) selection of quality materials. Manufactured from TIS standard steel grade steel or non-standard grade B steel. Can be checked from full weight. Steel cut and assembled Grate with modern machinery. Andateam of technical professionals with over 20 years producing steel grating
6) and calculate the maximum load of 30 tons of steel atathickness of 5mm. Height 25mm., With openings as small as 30mm. Suitable for drainage Factory Finalists Withalarge container trailer oratrailer run safely.
7) If the customer preparesashoulder height of more than 25mm. No higher grille required. Just use the reinforced steel on the shoulder to the higher. Then use sieve The 5mm version withathickness of 25mm, withasmall hole of just 30mm, is enough to handle the large trailer. Save money with the perfect design.
Ready Stock Sales Wareshouse of Hotdip Galvanized Bar Steel Grating สต๊อคพร้อมส่ง ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป ขนาด25×100ซม. และ 30×100ซม.
Ready Stock Sales Wareshouse of Hotdip Galvanized Steel Bar Steel wire mesh size 25×100 cm and 30×100 cm.
25×100 cm and 30×100 cm drainage grates are standard sizes. The company has stock available to customers to receive the goods immediately without waiting for production. In addition to Hot Dip Galvanized Steel Grating, customers can choose fromavariety of types of grate materials. Depending on the application in each area, such as Overflow Swimming Grating, PVC Grid, Polypropylene Grating and FRP Fiberglass Grating. Manufacturers who specialize in all types of standardized drainage grates include steel slats, rails, rails, drainage grilles. Grille Drain pipe Suitable for kitchen, cafeteria, factory, department store, bazaar, swimming pool, fish pond, raised walkway, etc.
STEEL GRATING Galvanized steel grating,
size 40×100 cm and size 50×100 cm.
Steel Grating Ladder Stair Tread Steel Grating Ladder Withaslippery nose. Adjustable base on side.
Clamshell Lock Holder Clip / Fastenal Fastener Fastenal Fastener (Clip Lock) The Clip Holder has2types of material, Stainless Steel SUS316 and Hot Dip Galvanized Steel.
HDG Steel Grating 253/40, Size 250x1000mm. Mesh 40x100mm. High 25mm. Thick Bar 3mm. // ตะแกรงเหล็กขนาด 25×100ซม. ช่องรู 4×10ซม. เหล็กหนา 3มม. สูง 2.5ซม.1. Steel Grating Size 25x100cm.: BB 253/40/100
HDG Steel Grating 253/40, Size 250x1000mm. Mesh 40x100mm. High 25mm. Thick Bar 3mm. // Steel Grating Size 25×100 cm 4×10 cm. Mm 2.5 cm
HDG Steel Grating 253/40, Size 300x1000mm. Mesh 40x100mm. High 25mm. Thick Bar 3mm. // ตะแกรงเหล็กขนาด 30×100ซม. ช่องรู 4×10ซม. เหล็กหนา 3มม. สูง 2.5ซม.2. Steel Grating Size 30x100cm.: BB 253/40/100
HDG Steel Grating 253/40, Size 300x1000mm. Mesh 40x100mm. High 25mm Thick Bar 3mm. // Steel Grating Size 30×100 cm. Mm 2.5 cm
HDG Steel Grating 255/30, Size 250x1000mm. Mesh 30x100mm. High 25mm. Thick Bar 5mm. // ตะแกรงเหล็กขนาด 25×100ซม. ช่องรู 3×10ซม. เหล็กหนา 5มม. สูง 2.5ซม.3. Steel Grating Size 25x100cm.: BB 255/30/100
HDG Steel Grating 255/30, Size 250x1000mm. Mesh 30x100mm. High 25mm. Thick Bar 5mm. // Steel Grating Size 25×100 cm. Hole Size 3×10 cm. Mm 2.5 cm
HDG Steel Grating 255/30, Size 300x1000mm. Mesh 30x100mm. High 25mm. Thick Bar 5mm. // ตะแกรงเหล็กขนาด 30×100ซม. ช่องรู 3×10ซม. เหล็กหนา 5มม. สูง 2.5ซม.4. Steel Grating Size 30x100cm.: BB 255/30/100
HDG Steel Grating 255/30, Size 300x1000mm. Mesh 30x100mm. High 25mm Thick Bar 5mm. // Steel Grating Size 30×100 cm. Hole Size 3×10 cm. Steel Thickness5Mm 2.5 cm
Applied Combination of Steel Grating Toaspecific area
Another option for customers who want to use steel grate beyond standard size. We distribute the width of the standard sheets to connect or put together to getanew size according to the work of each area immediately. Examples of use asastepped terrace. Paved walkways The standard size can be combined together from2345 .. The overall sheet from different widths together. To get the new sizes: 1pcs: 25 / 30cm. || 2pcs: 50/55 / ​​60cm. || 3pcs: 75/80/85 / 90cm. || 4pcs: 100/105/110/115/120 cm .
Advantages include the application of standard iron mesh width of the plate. Suitable for specific areas.
1. Save time can buy and receive goods immediately. Because there are more than 5,000 stock ready to ship without waiting for the order. In general, it takes both welding and plating resistance to rust over 15-30 days.
2. cheaper than order Because cost savings. To order according to the size that customers want. Prices may need to be calculated. Add the welding process and send to anti-rust.
3. Get high quality products. Because standard production process. It’sarobot-like job, making every product the same size. Weld annealing and coating homogeneity on all sides
4. Customers can orderastandard size rails immediately without referring to calculate additional details. They just have to point welds with paint coating resistant to rust after combination
5. coated with galvanizing Hot dip Galvanizing thickness less than 75 microns according to ASTM A123, ASTM B6 (not paint rust spray. / Make Likeatypical ironmongery This makes weathering easier than HDG plating).
Welded Steel Bar Grating Order / วิธีการสั่งผลิตตะแกรงเหล็ก.
จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพิ่มเติมอีก3อย่างเกี่ยวกับ “หนา”, “สูง” , “รู”
Ordering steel wire mesh production in addition to the width x length Of the grate plate that the customer needs.
Need to know more3about “bold”, “high”, “Hole”
1) length x width (the size ofasheet of grid)
2) thickness (steel plate andamill 3mm or 5mm)
3) high. (like steel floor-to-shoulder edge, 25mm or 50mm)
4) holes (aperture grille 3x10cm or 4x10cm. or 5x10cm.).
Welded Steel Bar Grating Standard Features1. ระบบเชื่อมด้วยเครื่องอัตโนมัตจนทำให้รอยเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน แข็งแรงกว่า โดยเชื่อมด้วยระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตะแกรงเหล็กส่วนที่เป็นรอยเชื่อมจะเรียบเนียนสวยงาม และยึดติดแข็งแรงทนทานกว่าร้านเชื่อมเหล็กทั่วไป
Welding of steel grating from Shannon Airport
Welded Steel Bar Grating Standard Features.
1. Automatic welding system to make the joints smelter homogeneous stronger by welding with CO2 / MIG system, which is electrically welded to the same melted steel. The welded steel mesh is smooth and beautiful. And bonding strength than steel welding shop
2. designed to put steel frame grille is the most appropriate term. Using less lightweight materials While still able to receive maximum force. Ensure that both welds and structural strength are uniform.
3. Hot dip Galvanizing galvanizing is not less than 75 microns in accordance with ASTM A123, ASTM B6 (do not use rust-proof paint). Likeatypical ironmongery This makes weathering easier than HDG plating).
ในกรณีที่มีรางระบายน้ำเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ออกแบบให้มีบ่ารองรับรูปตัวแอลไว้ ถ้าต้องทำตะแกรงระบายน้ำไปวางไว้ด้านบน จะทำให้พื้นไม่เสมอกัน และไม่ปลอดภัยจากการเคลื่อนตัวของตะแกรงที่อยู่ด้านบนได้ วิธีนี้จึงถือเป็นงานแก้ไข กรณีไม่มีการเตรียมบ่ารับ จะต้องทำปีกเป็นเหล็กแผ่นยื่นออกมาทั้งสองข้าง แม้จะทำให้ไม่แข็งแรงมาก ผิวสะดุดเล็กน้อย แต่ก็ทำให้แผ่นตะแกรงไม่เคลื่อนตัวหลุดไปมา ปลอดภัยและดูสวยงามกว่าWelded Steel Bar Grating for Trench Cover (without L-Angle prepared)
In the case of existing drains already. But not designed to haveashoulder to support the L shape. If the drainage grid is to be placed on top. The floor is not always the same. And not safe from the movement of the sieve on the top. This way, it is consideredarevision. In case of no preparation. Will have to makeasteel plate out on both sides. Even if it is not very strong. The skin stumbles slightly. But the grate plate does not move away. Safe and beautiful
กรณีบ่ารับตัวแอล ออกแบบไว้สูงกว่าความสูงตะแกรง ถ้าจะทำให้ตะแกรงสูงเสมอกับพื้นต้องปรับขนาดเหล็กให้สูงเท่ากันทั้งหมด ต้องใช้งบมากและอาจเกินความจำเป็นทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีรถวิ่งผ่านด้านบน เพื่อประหยัดงบและทำให้ตะแกรงสามารถวางเสมอกับพื้นได้ เราเพียงแต่เสริมเฉพาะด้านข้างของตะแกรงให้พอดีกับบ่ารับ ตัวอย่างรูปการเสริมความสูงของตะแกรง เช่น เพิ่มความสูงจาก 25mm. เป็น 50mm.High Adjust Welded Steel Bar Grating Design:
The design of reinforced steel grate to the ground.
In case of receiving LL The design is higher than the sieve height. If the grid is always high, the iron must be adjusted to the same height. It requiresalot of budget and may be overkill, even in the absence ofacar running through the top. To save money and make the rack can always be placed on the floor. We just added only the side of the grille to fit the shoulder. Example of reinforcing the height of the sieve, such as raising the height from 25mm to 50mm.
3. ตะแกรงเหล็กแผ่นสำเร็จรูปของบริษัทแชนคอน ใช้เหล็กบิดเกลียว twist rod กันลื่น เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันกับเหล็กแผ่น Flat bar เชื่อมด้วยระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน โปรดตรวจสอบงานเชื่อมเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนเชื่อม รับประกันงานคุณภาพความแข็งแรงที่ลูกค้าต้องพิสูจน์ก่อนตัดสินใจ โดยพิจารณาจาก ขนาดช่องรูเล็กได้มาตราฐานเหมือนกัน รอยเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวทุกด้าน งานชุบซิงค์หนากว่า 75 ไมครอนได้ตามมาตรฐาน ทำให้แข็งแรงและทนทานต่อการสึกกร่อนได้นานกว่าWhy Choose CHANCON
Welded Steel Bar Grating Advantage?
1. There are all types of drainage grids. We areaspecialized manufacturer of standard drainage grates, including steel ladders, slippery rails, drainage grilles. Grille Drain hose
2. quality material selection Made from standard steel, TIS steel cut and grinded with modern machinery. Andateam of professional steel grinder manufacturers over 20 years.
3. Shalek Steel Tube Grating Twisted-steel twist rod is used in the same way as the flat bar welding with CO2 / MIG system, which is electrically welded to the steel. Please check the welding work compared to manual labor. Quality assurance guarantee that customers must prove before deciding. By considering Small hole size is standard. The melting is all on one side. Zinc-plated work more than 75 microns standard. Strong and resistant to erosion longer.
How to prevent rust Galvanized steel grating Galvanized steel grating Or galvanized steel grating The purpose is to protect the iron grating from rust. Anti-corrosion Extend the life of the steel grating. There are many methods of plating. In Thailand, there are two types of galvanizing :
0 1.Hot dipped Galvanized or dipped galvanized Is to dip iron intoamolten zinc well This type of plating is suitable for high durability, external work, severe environment, acidic pH, plating thickness of 65-300 microns.
2. Electro plated Galvanized or zinc plated. Is zinc electroplating This coating is suitable for indoor use. Or elements that are not exposed to extreme environmental conditions. Thicknesses in plating 5-10 microns
Which option to galvanize? Should be suitable for use.
1. environment Inside or outside the building By the sea Or inafactory with acidic pH conditions. If inaharsh environment, use Hot dipped Galvanized. Longer service life
2. Design requirements (Specification) Check the specifications of the designer before deciding which method of galvanizing as the thickness of the plating. If the information is not detailed. Ask the designer before deciding on the method of plating.
3. Size of workpiece It is important to check with the galvanizing plant how large the workpiece can be plated. Because each plating factory Different plating pond sizes. Should be checked before sending to plating.
Caution if the workpiece is to be welded. The workpiece should be completed before plating. Due to the welding, the work surface is plated and burned black. And may be the cause of the close. However, if it is necessary to galvanize the workpiece before assembly and installation, it is recommended to useazinc coloring compound at the point of welding and the point where the black marks are to be covered. It also providesaharmonious color, as well as prevent the occurrence of it.
Anchoring Devices attach bar grating to its supports. We offer saddle clips, anchor blocks, plank clips, countersunk lands, grating clamps, Z clips, and plank lugs. Many are available in aluminum, stainless steel and galvanized steel.Steel bar grating production type is manufactured from ASTM mild carbon steel and is available in three distinct products: type “W” welded bar grating, type “DT” dovetail pressure locked grating, and type “SL” swage locked grating. All three products are available with bearing bar spacing ranging on center and cross bars at either on center. Each product hasastandard plain surface or may be specified with optional serrated or Algrip surfaces. Finish options include bare steel, painted, hot dip galvanized, or specialty coatings. The steel bar grating load tables provide detailed specification information related to these products.
Expanded Metal Grating and Mesh: Expanded metal grating or expanded metal mesh is the most practical and economical way to assure strength, safety, andanon-skid surface. Expanded metal grating is ideal for use on plant runways, working platforms, and catwalks, as it is easily cut into irregular shapes and can be installed quickly by welding or bolting. Wire mesh, also called wire cloth or wire fabric, isaversatile metal product that can be effectively used in countless applications throughout the world. From industrial to commercial uses, wire mesh isacommon metal product used every day. Aluminum mesh, copper mesh and brass mesh are among the list of wire mesh material types that also include bronze, mild steel, pre-galvanized steel and stainless steel.Specification of Heavy Duty Steel Grating:
6. Tolerance The allowed deviation of length is +0/-5mm, while the allowed deviation of width is +/-5 mm. The non-perpendicularity of bearing bar is allowed no more than 10% of width of bearing bar. Cross bar surface should not surpass bearing bar surface 1mm, beginning & end of cross bar should not surpass the end surfaces of two sides of grating 2mm.Our Architectural Metal Products can be used in various applications from industrial to architectural usages. Choose from our architectural patterns in wire mesh, perforated, expanded or grating.
Another architectural bar grating application includes steel grates, which are an integral part of the interior of industrial plants and the exterior landscape all around us. Also known as metal grates, steel grates permit the passage of air, light, heat and liquid and therefore are useful in screening out unwanted elements and debris in various settings. Driveway drains, stormwater drains, trench drains and floor drains are typically fit with steel grates. Steel grates are also functional for industrial decks and flooring in chemical plants, food processing facilities, and oil and gas refineries. In addition, pedestrians rely on steel grates in public walkways, and near fountains and trees.Wire mesh, also called wire cloth or wire fabric, isaversatile metal product that can be effectively used in countless applications throughout the world. From industrial to commercial uses, wire mesh isacommon metal product used every day. Aluminum mesh, copper mesh and brass mesh are among the list of wire mesh material types that also include bronze, mild steel, pre-galvanized steel and stainless steel. To viewadescription of each material type available, click on the Wire Mesh Material Types PDF below.
ເຕົາບາສະຫວ່ານເຫລໍກຮ້ອນ (HotDip Galvanized) ສໍາລັບ dritch ditch ຖະຫນົນຍ່າງ
ຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ. ກະເບື້ອງເຫລໍກສະແຕນເລດສະແຕນເລດ ການນໍາໃຊ້ rod twist rod twist, ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ slip, homogeneous ກັບແຖບທະເລເຫຼັກ. Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastener
Shancon Steel Gratings feature (ມາດຕະຖານການເຊື່ອມໂລຫະແລະແຜ່ນຫນາ) 1. ເຫຼັກປີ້ງສໍາເລັດກັບບໍລິສັດໄດ້. ຂະຫນາດມາດຕະຖານ2ຂະຫນາດ 25 ຊຕມແລະ 30 ຊຕມໃນກໍລະນີລູກຄ້າຕ້ອງການຂະຫນາດ 50x100cm. ສາມາດນໍາໃຊ້ກັບການເຊື່ອມໂລຫະຫຼືເອົາແຜ່ນ 25 ຊມສອງແຜ່ນຮ່ວມກັນ. ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ 100x100cm ຂະຫນາດທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້4ແຜ່ນເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍ 25 ຊຕມ. ຫຼືຖ້າຫາກວ່າ 60x100cm. ຫຼື 100x120cm. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ກັບ 30x100cm ແຜ່ນ Composite. ດີ 2. ເຫຼັກແຜ່ນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າການຜະລິດທີ່ມີຄວາມຫນາຂອງ2ຂະຫນາດໄດ້. ມັນມີ3ມມແລະ5ມົມແຜ່ນເຫລໍກຫນາ3ມົມທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ແຮງດັນຫນ້ອຍກວ່າລົດຍົກ. ໃນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນລົດບັນທຸກແລ່ນຜ່ານລົດລໍ້ຫົກລໍ້ຫົກລໍ້ໄປຫາລົດພ່ວງຂະຫນາດໃຫຍ່. ມັນຖືກແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຫນາ5ມມເພາະວ່າມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຂະຫນາດນ້ອຍແລະຫນາ, ມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງກວ່າ 25 ໂຕນ.3ແຜ່ນສະແຕນເລດ ຜະລິດໂດຍໃຊ້ທໍ່ແປ້ງຫນຽວ, ຫນາ 6-8 ມມ, ເພື່ອປະສົມແຜ່ນເຫຼັກຮ່ວມກັນ. ແລະຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນການລົ້ມເຫລວໃນ. ຈຸດສໍາຄັນແມ່ນວ່າມັນເປັນແບບດຽວກັນກັບເຫຼັກແທ່ງ, ເຊິ່ງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍ CO2 / MIG, ເຊິ່ງຖືກເຊື່ອມໂລຫະໂດຍກົງກັບເຫຼັກດຽວກັນ. (ກະລຸນາກວດເບິ່ງການເຮັດວຽກການເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອທຽບກັບແຮງງານການເຊື່ອມໂລຫະ). ໂດຍພິຈາລະນາ ຂະຫນາດຂຸມແມ່ນມາດຕະຖານດຽວກັນ. ການລົ່ມສະຫລາຍແມ່ນຢູ່ຂ້າງຫນຶ່ງ. ການເຮັດວຽກທີ່ມີປະຕິກິລິຍາເຄືອບຫຼາຍກວ່າ 75 microns ມາດຕະຖານ. ການຕໍ່ຕ້ານຕໍ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະຍາວກວ່າ. ແຜ່ນເຄືອບຫນາແລະການເຄືອບສານສະກັດ
ຂາຍດີທີ່ສຸດ #2HDG. STEEL GRATING Grating galvanized steel.
Hotdip Galvanized Steel Bar Grating Steel Grating ການນໍາໃຊ້ເຫຼັກທຽນ twisted ຄູ່ twist ຄູ່ເພື່ອລື່ນ smoothly ແລະ cohesive ກັບແຖບຮາບພຽງຢູ່ກັບລະບົບ CO2 / MIG, ເຊິ່ງແມ່ນ welded ໂດຍຜ່ານໄຟຟ້າກັບອຸປະກອນການດຽວກັນ. ກະລຸນາກວດເບິ່ງການເຮັດວຽກການເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອປຽບທຽບກັບແຮງງານທີ່ເຮັດດ້ວຍມື. ການປະກັນຄຸນະພາບວຽກຮັບປະກັນ. ລູກຄ້າຕ້ອງພິສູດກ່ອນຕັດສິນໃຈ. ໂດຍພິຈາລະນາ ຂະຫນາດຂຸມແມ່ນມາດຕະຖານດຽວກັນ. ການລົ່ມສະຫລາຍແມ່ນຢູ່ຂ້າງຫນຶ່ງ. ການເຮັດວຽກທີ່ມີປະຕິກິລິຍາເຄືອບຫຼາຍກວ່າ 75 microns ມາດຕະຖານ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນກ່ວາ
ໂດຍທົ່ວໄປ ມາດຕະຖານຂອງການລະບາຍ grating width ຂອງ 25 ຊຕມແລະ 30 ຊຕມ , ພຽງແຕ່ການກະກຽມການອອກແບບຄວນຈະຮອງຮັບ ລະດັບຄວາມກ້ວາງຈາກ 255 ຈາກ 260 ຊຕມຫຼື 305 ກັບ 310 cmກັບ. ຊື້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທັງຫມົດໃຫ້ທັນທີ.
ຂອງອາບນ້ໍຄູ່ມື, ຕີນ Galvanized ຂອງ ‘ຮ້ອນ Grating ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງ (3mm ຫນາພາທະນາຍຄວາມແມ່ນ Vs The 5mm..) :. 3mm ຫນາຕາຂ່າຍ, 40×100 -VS- :. 5mm ຫນາຕາຂ່າຍ, 30×100
1) ຜະລິດຕະພັນການລະບາຍທາດເຫຼັກ. ຂະຫນາດມາດຕະຖານກວ້າງ 25cm ແລະຍາວ 30cm, 1 ແມັດ, ເກັບໄວ້ໃນທັນທີ. ລາຍການທັງຫມົດ 2) ລະບົບລະບາຍນ້ໍາແມ່ນເຂັ້ມແຂງກວ່າດຽວ. ໂດຍອັດຕະໂນມັດລະບົບ CO2 / MIG, ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ທາດເຫຼັກ. ທາດເຫຼັກທີ່ກະຕັນຍູ, ການເຊື່ອມໂລຫະແມ່ນລຽບແລະສວຍງາມ. ແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ເຮັດໃຫ້ກ່ວາຮ້ານເຊື່ອມເຫຼັກ , 3) ເຄືອບໂດຍຊຸບອາບນ້ໍຮ້ອນ Galvanizing ຫນາຫນ້ອຍກ່ວາ 75 microns.ອີງຕາມ ASTM A123, ASTM B6 (ບໍ່ໃຊ້ສີໂລຫະ / ສີສີດ). ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮ້ານເຫຼັກທົ່ວໄປ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ດິນຟ້າງ່າຍຂຶ້ນກວ່າແຜ່ນ HDG.)
ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຫນ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ສູງສຸດ. ມັນຮັບປະກັນວ່າການເຊື່ອມໂລຫະ. ໂຄງສ້າງແລະຄວາມສອດຄ່ອງ 5) ການຄັດເລືອກຂອງອຸປະກອນມີຄຸນນະພາບ. ເຮັດຈາກເຫລໍກ TIS ມາດຕະຖານ , ບໍ່ແມ່ນເຫຼັກ B ຫຼືມາດຕະຖານ. ສາມາດກວດສອບໄດ້ຈາກນ້ໍາຫນັກຢ່າງເຕັມທີ່. ຕັດເຫລໍກແລະຕິດຕັ້ງ ຂອບໃຈກັບເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄຫມ. ແລະທີມງານຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ປີການຜະລິດເຫຼັກ grating 6) ແລະຄິດໄລ່ການໂຫຼດສູງສຸດຂອງ 30 ໂຕນເຫຼັກທີ່ຄວາມຫນາຂອງ 5mm. ສູງ 25mm. ເປັນ, ມີການເປີດເປັນຂະຫນາດນ້ອຍເປັນ 30mm. ເຫມາະສໍາລັບການລະບາຍນ້ໍາ Factory Finalists ພຽງແຕ່ໃຊ້ເຫລໍກກ້າເສີມຢູ່ເທິງບ່າໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນໍາໃຊ້ sieve ຮຸ່ນ 5mm ມີຄວາມຫນາ 25 ມົມ, ມີຮູນ້ອຍພຽງແຕ່ 30 ມມ, ແມ່ນພຽງພໍທີ່ຈະຈັດການ trailer ຂະຫນາດໃຫຍ່. ປະຫຍັດເງິນດ້ວຍການອອກແບບທີ່ສົມບູນແບບ.
ພ້ອມທີ່ຈະຂາຍຫຼັກຊັບ Wareshouse ຂອງ Hotdip ເຫຼັກກ້າ Galvanized ທໍ່ເຫລໍກ 25×100 ຊົມ ແລະ 30×100 ຊົມ
ແກນລະບາຍ 25×100 ແລະ 30×100 ຊຕມມີມາດຕະຖານມາດຕະຖານ. ບໍລິສັດມີຫຼັກຊັບທີ່ມີໃຫ້ກັບລູກຄ້າເພື່ອຮັບຜະລິດຕະພັນທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າການຜະລິດ. ນອກຈາກ Hot Dip Galvanized Steel Grating, ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຈາກຫລາກຫລາຍປະເພດຂອງທໍ່ນ້ໍາປະເພດຕ່າງໆ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບການນໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ເຊັ່ນ: Overflow Swimming Grating, ເຕົາອົບໃນ PVC Overlay Swimming Grating, PE Polypropylene Grating ແລະ FRP fiberglass Grating. ຜູ້ຜະລິດຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນທຸກປະເພດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານປະກອບມີແຜ່ນເຫລໍກ, ເສັ້ນທາງ, ເສັ້ນທາງ, ນໍ້າ, ນໍ້າ, ຂີ້ເຫຍື້ອ. Grille ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ ເຫມາະສໍາລັບເຮືອນຄົວ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງງານ, ຫ້າງສັນພະສິນຄ້າ, ບາຊ່າ, ສະລອຍນ້ໍາ, ຫນອງປາ, ຖະຫນົນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາ, ແລະອື່ນໆ.
STEEL GRATING Grid galvanized steel grating, size 40×100 cm and size 50×100 cm
Steel Grating Ladder Stair Tread Steel Grating Ladder ມີດັງທີ່ລ້າໆ ມີພື້ນຖານທີ່ປັບໄດ້.
HotDipGalvanized Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Fastener |
ການສະແດງຮູບແບບຂອງການສະກັດກັ້ນເຫລໍກທີ່ຍືດຫຍຸ່ນແບບເຫລໍກຫລາກຫລາຍສະແຕນເລດເຫລໍກຫລາກລາກເຫລໍກແຜ່ນສັງກະສີ (Zinc HDG)
ການຮູ້ບຸນຄຸນ Steel ຂອງຂະຫນາດ 1. 25x100cm .: 253/40/100 ໄດ້ BB
hdg, 253/40 ຮູ້ບຸນຄຸນ Steel ຂອງ, 250x1000mm ຂະຫນາດໄດ້. Mesh, 40x100mm. A 25mm High .: Bar ຫນາແມ່ນ 3mm. // ຂະຫນາດຕາຫນ່າງເຫຼັກ 25×100 ຊມເປີດ 4×10 cm ເຫຼັກຫນາ 3. Mm 25 cm
ການຮູ້ບຸນຄຸນ Steel ຂອງຂະຫນາດທີ່230x100cm .: 253/40/100 ໄດ້ BB
hdg, 253/40 ຮູ້ບຸນຄຸນ Steel ຂອງ, 300x1000mm ຂະຫນາດໄດ້. Mesh, 40x100mm. A 25mm High .: Bar ຫນາແມ່ນ 3mm. // ຂະຫນາດຕາຫນ່າງເຫຼັກ 30×100 ຊມເປີດ 4×10 cm ເຫຼັກຫນາ 3. Mm 25 cm
ການຮູ້ບຸນຄຸນ Steel ຂອງຂະຫນາດທີ່325x100cm .: 255/30/100 ໄດ້ BB
hdg, 255/30 ຮູ້ບຸນຄຸນ Steel ຂອງ, 250x1000mm ຂະຫນາດໄດ້. Mesh, 30x100mm. A 25mm High .: Bar ຫນາແມ່ນ 5mm. // ຂະຫນາດຕາຫນ່າງເຫຼັກ 25×100 ຊມເປີດ 3×10 cm ເຫຼັກຫນາ 5. Mm 25 cm
ການຮູ້ບຸນຄຸນ Steel ຂອງຂະຫນາດ430x100cm .: 255/30/100 ໄດ້ BB
hdg, 255/30 ຮູ້ບຸນຄຸນ Steel ຂອງ, 300x1000mm ຂະຫນາດໄດ້. Mesh, 30x100mm. A 25mm High .: Bar ຫນາແມ່ນ 5mm. // ຂະຫນາດຕາຫນ່າງເຫຼັກ 30×100 ຊມເປີດ 3×10 cm ເຫຼັກຫນາ 5. ມ. 2.5 ຊຕມສູງ.
ຕົວເລືອກອື່ນສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ເຫຼັກນອກເຫນືອຈາກມາດຕະຖານມາດຕະຖານ. ພວກເຮົາແຈກຢາຍຄວາມກວ້າງຂອງແຜ່ນມາດຕະຖານເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຫຼືວາງໄວ້ຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂະຫນາດໃຫມ່ຕາມວຽກຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່ທັນທີ. ຕົວຢ່າງແມ່ນການໃຊ້ຂັ້ນຕອນຂັ້ນຕອນ. ຖະຫນົນຍ່າງ ຂະຫນາດມາດຕະຖານສາມາດຖືກລວມກັນຈາກ2345 .. ແຜ່ນທົ່ວຈາກຄວາມກວ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັນ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃຫມ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ 1pcs:. 25 / 30cm || 2pcs :. 50/55 / 60cm ||3ຊິ້ນ:. 75/80/85 / 90cm ||4ຊິ້ນ: 100/105/110/115/120 cm. .
ຂໍ້ດີປະກອບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ width mesh ທາດເຫຼັກມາດຕະຖານຂອງແຜ່ນໄດ້. ເຂົ້າຫາສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມ
1. ປະຫຍັດເວລາ, ຊື້ແລະຮັບສິນຄ້າທັນທີ. ເນື່ອງຈາກວ່າມີຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຮຸ້ນພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຄໍາສັ່ງ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ມັນຕ້ອງໃຊ້ການເຊື່ອມໂລຫະແລະທໍ່ທີ່ທົນທານຕໍ່ການຂີ້ເຫຍື້ອໃນໄລຍະ 15-30 ມື້.
2 ລາຄາຖືກກວ່າຄໍາສັ່ງ ເນື່ອງຈາກວ່າປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ເພື່ອໃຫ້ຄໍາສັ່ງຕາມຂະຫນາດທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ. ລາຄາອາດຈະຕ້ອງຖືກຄິດໄລ່. ຕື່ມການເຊື່ອມໂລຫະແລະຖືກສົ່ງໄປຫາຫນ້າດິນ rust
3 ການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ. ເນື່ອງຈາກຂະບວນການຜະລິດມາດຕະຖານ. ມັນເປັນວຽກທີ່ຄ້າຍຄືຫຸ່ນຍົນ, ເຮັດໃຫ້ທຸກຜະລິດຕະພັນມີຂະຫນາດດຽວກັນ.
ພວກເຂົາພຽງແຕ່ຕ້ອງຊີ້ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ມີສີເຄືອບທົນທານຕໍ່ກັບ rust ຫຼັງຈາກປະສົມປະສານ
5. ເຄືອບດ້ວຍຊຸບອາບນ້ໍຮ້ອນ Galvanizing ຫນາຫນ້ອຍກ່ວາ 75 microns ຕາມ ASTM A123, ASTM B6 (ບໍ່ໄດ້ທາສີສີດ rust. / Make ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮ້ານເຫຼັກທົ່ວໄປ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ດິນຟ້າງ່າຍກວ່າ HDG).
ຄໍາສັ່ງ Grating Order Welded Steel Bar
ການສັ່ງຊື້ການຜະລິດຕາຫນ່າງເຫຼັກນອກຈາກຄວາມຍາວ width x ຂອງແຜ່ນທີ່ຮູ້ບຸນຄຸນທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ.
ຕ້ອງການຢາກຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ3“ກ້າຫານ”, “ສູງ”, “ຂຸມ”
1) width ຍາວ x (ຂະຫນາດຂອງເອກະສານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້)
2) ຄວາມຫນາ (ແຜ່ນເຫຼັກແລະໂຮງຫລອມເປັນ 3mm ຫຼື 5mm)
3) ສູງ. (ເຊັ່ນ: ເຫຼັກຊັ້ນ-to-ບ່າແຂບ, 25mm ຫຼື 50mm)
4) ຮູ (ຮູຮັບແສງປີ້ງ 3x10cm ຫຼື 4x10cm. ຫຼື 5x10cm.).
ການເຊື່ອມຂອງເຫຼັກ grating ຈາກ Shannon ສະຫນາມບິນ ຄຸນສົມບັດ Welded Steel Bar Grating Standard.
1. ລະບົບການເຊື່ອມໂລຫະແບບອັດຕະໂນມັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ກະດູກມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ເຂັ້ມແຂງໂດຍການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍລະບົບ CO2 / MIG, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກເຊື່ອມໂລຫະໂດຍກົງກັບເຫຼັກດຽວກັນ. ທາດເຫຼັກທີ່ກະຕັນຍູ, ການເຊື່ອມໂລຫະແມ່ນລຽບແລະສວຍງາມ. ແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ເຮັດໃຫ້ກ່ວາເຫຼັກຮ້ານເຊື່ອມ
2. ອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປີ້ງກອບເຫຼັກແມ່ນໄລຍະທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ. ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຫນ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ສູງສຸດ.
3. ຮັບປະກັນວ່າທັງສອງ welds ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂຄງສ້າງແມ່ນເອກະພາບ 3. ການເຄືອບຍືດຫຍຸ່ນຢ່າງຫນ້ອຍ 75 micron ຕາມມາດຕະຖານ ASTM A123, ASTM B6 (ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ສີໂລຫະ). ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮ້ານເຫຼັກທົ່ວໄປ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ດິນຟ້າງ່າຍກວ່າ HDG).
ແກນສະແຕນເລດເຫຼັກສໍາລັບການປົກຫຸ້ມຂອງທໍ່ (ໂດຍບໍ່ມີການກໍານົດ L-Angle) ໃນກໍລະນີຂອງນໍ້າທີ່ມີຢູ່. ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ມີແຂນສະຫນັບສະຫນູນຮູບຮ່າງ L. ຖ້າຕາຂ່າຍລະບາຍນ້ໍາຖືກວາງຢູ່ເທິງ. ຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນເຮືອນບໍ່ເທົ່າກັນ ແລະບໍ່ປອດໄພຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜ້າມ່ານເທິງ. ວິທີນີ້, ມັນຖືກພິຈາລະນາການແກ້ໄຂ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີການກະກຽມ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປີກມີແຜ່ນເຫລໍກທີ່ລອກອອກມາທັງສອງດ້ານ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ແຂງແຮງ. ຜິວຫນັງ stumbles ເລັກນ້ອຍ. ແຕ່ແຜ່ນທີ່ຮູ້ບຸນຄຸນບໍ່ຍ້າຍອອກໄປ. ປອດໄພແລະສວຍງາມ
ການອອກແບບຂອງເຫລໍກທີ່ໄດ້ຮັບການເສີມເຫລໍກເພື່ອພື້ນດິນShoulder bag for L ການອອກແບບແມ່ນສູງກ່ວາລະດັບຄວາມສູງຂອງຖາດ. ຖ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສູງສະເຫມີໄປຫາພື້ນ, ທາດເຫຼັກຕ້ອງຖືກປັບໃຫ້ສູງເຖິງລະດັບດຽວກັນ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີງົບປະມານຫຼາຍແລະອາດຈະ overkill, ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີລົດທີ່ແລ່ນຜ່ານທາງເທິງ. ເພື່ອປະຢັດເງິນແລະເຮັດໃຫ້ rack ສະເຫມີສາມາດຖືກຈັດໃສ່ໃນຊັ້ນ. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ເພີ່ມເບື້ອງຂອງຖາດໃຫ້ເຫມາະສົມກັບບ່າ. ຕົວຢ່າງຂອງການເສີມຄວາມສູງຂອງຖາດ, ເຊັ່ນ: ການຍົກສູງຄວາມສູງຈາກ 25 ມມເຖິງ 50 ມມ.
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກທີ່ ດີເລີດ Grantic Advantage Grant Welded?
1. ມີທຸກປະເພດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ເລົາເປັນຜູ້ຜະລິດເສພາະຂອງລະບົບລະບາຍນ້ໍາມາດຕະຖານລວມທັງຮາງເຫລໍກລຽບລຽບລາກລາກ Grille ທໍ່ນ້ໍາ
2. ຄັດເລືອກເອົາວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເຮັດຈາກເຫລໍກມາດຕະຖານ, ຕັດເຫລໍກ TIS ແລະຂັດກັບເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄຫມ. ແລະທີມງານຜະລິດຕະພັນເຫລໍກກ້າມເປັນມືອາຊີບໃນໄລຍະ 20 ປີ.
3 Shalek Steel Tube Grating ການນໍາໃຊ້ rod twist rod twist ເພື່ອລຽບເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຊື່ອມໂລຫະຮາບກັບລະບົບ CO2 / MIG, ທີ່ຖືກເຊື່ອມໂລຫະໂດຍກົງກັບເຫຼັກເພື່ອ homogeneous molten. ກະລຸນາກວດເບິ່ງການເຮັດວຽກເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຮງງານທີ່ນໍາໃຊ້. ການຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າຕ້ອງພິສູດກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ. ໂດຍພິຈາລະນາ ຂະຫນາດຂຸມແມ່ນມາດຕະຖານດຽວກັນ. ການລົ່ມສະຫລາຍແມ່ນຢູ່ຂ້າງຫນຶ່ງ. ການເຮັດວຽກທີ່ມີປະຕິກິລິຍາເຄືອບຫຼາຍກວ່າ 75 microns ມາດຕະຖານ. ການຕໍ່ຕ້ານຕໍ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະຍາວກວ່າ.
ວິທີປ້ອງກັນການຂີ້ເຫຍື້ອ ຕາຂ່າຍເຫລໍກແກະສະຫຼັກ ຕາຂ່າຍເຫລໍກແກະສະຫຼັກ ຫຼື grating ທາດເຫຼັກ galvanized ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຫື່ອອອກຈາກເຫລໍກຂີ້ເຫຍື້ອ. ການຕ້ານ corrosion ຂະຫຍາຍຊີວິດຂອງຕາຫນ່າງເຫຼັກ. ມີວິທີການຈໍານວນຫຼາຍຂອງແຜ່ນ. ໃນປະເທດໄທມີສອງປະເພດຄື: 1 ແມ່ນການແຊ່ທາດເຫຼັກເຂົ້າໄປໃນດິນທີ່ດີຂື້ນ ປະເພດຂອງແຜ່ນນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຄວາມທົນທານສູງ, ການເຮັດວຽກພາຍນອກ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫນັກຫນ່ວງ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ pH, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ 65-300 microns. 2. Electro plated Galvanized ຫຼື zinc plated. ແມ່ນການ electroplating ສັງກະສີ ການເຄືອບນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນເຮືອນ. ຫຼືອົງປະກອບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຄວາມຫນາຂອງ 5-10 microns ເຊິ່ງທາງເລືອກ galvanizing ທີ່ຈະເລືອກເອົາ? ຄວນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້.
ມີສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາ: 1 environment ພາຍໃນຫຼືພາຍນອກອາຄານ ໂດຍທະເລ ຫລືໃນໂຮງງານທີ່ມີເງື່ອນໄຂ pH ກົດ. ຖ້າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ນໍາໃຊ້ນ້ໍາຮ້ອນຊຸ່ມຊື່ນຍ້ອນວ່າມັນທົນທານຫຼາຍ. ຊີວິດການບໍລິການຍາວ 2. ຄວາມຕ້ອງການອອກແບບ (Specification) ກວດເບິ່ງຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ອອກແບບກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈວ່າວິທີການປະຕິສັງກະສີເປັນຄວາມຫນາຂອງແຜ່ນ. ຖ້າຂໍ້ມູນບໍ່ມີລາຍລະອຽດ. ຂໍໃຫ້ນັກອອກແບບກ່ອນຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວິທີການທໍ່. 3. ຂະຫນາດຂອງ workpiece ມັນຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບກັບໂຮງງານຜະລິດແກ້ວປະເພດວິທີການຂະຫນາດໃຫຍ່. ເນື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະໂຮງງານຜະລິດແຜ່ນ ຂະຫນາດຫນອງຫນອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວນຈະຖືກກວດເບິ່ງກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງໃຫ້ແຜ່ນ.
ຄໍາເຕືອນຖ້າສິ້ນເປື້ອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຊື່ອມໂລຫະ. ສິ້ນຄວນເຮັດສໍາເລັດແລ້ວກ່ອນທີ່ຈະວາງແຜ່ນ. ເນື່ອງຈາກການເຊື່ອມໂລຫະນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ຮົ່ມແລະໄຟໄຫມ້ຈຸດສີດໍາ. ແລະອາດຈະເປັນສາເຫດຂອງການປິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຈັກງານສິ້ນເປືອງແຮງງານກ່ອນທີ່ຈະປະກອບແລະຕິດຕັ້ງ, ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ເມັດສີສັງກະສີເພື່ອປະທັບຕາຂອງຊິ້ນວຽກແລະຈຸດດູດຂອງມັນ. ມັນຍັງສະຫນອງສີທີ່ປະສົມກົມກຽວ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປ້ອງກັນການປະກົດຕົວຂອງມັນເຊັ່ນດຽວກັນ.
Contact & Information || ติดต่อสั่งซื้อ ขอแผ่นที่ อีเมล์ ไลน์ ตรวจสอบราคาสินค้า คุณสมบัติ วิธีการตัด ติดตั้ง ผลทดสอบ A. Contact ພວກເຮົາ: ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ Get Map ແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ B. ລາຄາ, ສະເຫນີລາຄາ: ລາຄາສະເຫນີລາຄາການບິນ C. ທັງຫມົດເອກະສານຂອງໂຄງການນີ້: ລູກຄ້າ. Application ວິທີການທີ່ຈະຊື້ D. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການຜະລິດ Fiberglass FiberGlass Vinyl Resin ອາຫານ Grade FRP E. ບໍລິການ Grating: ການສັ່ງຊື້, ການຕິດຕັ້ງ, ການອອກແບບ, ການທົດສອບ, ການສະຫນັບສະຫນູນ – ສານເຄມີ F. Dealer Sales Wanted: Request ໃນຖານະຜູ້ຂາຍ ຈ້າງພະນັກງານຂາຍ
# GRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, # Ductile-Cast-Iron MANHOLE # ເຫຼັກເຫລັກ, Fiberglass, Overflow ພາດສະຕິກ, COVER, #Swimming Overflow ບາຍນ້ໍາ Gully Gutter ຮູ້ບຸນຄຸນ, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, # Egg Crate ປີ້ງແຜ່ກະຈາຍ Divider ໄຟຕູ້ປາ Panel, #Tree Guard ຄວາມປອດໄພ grating, # sieve ຈັ່ນຈັບ debris, ຂີ້ເຫຍື້ອຝັງໃນວິຖີຊີມັງ. •ຊັບພະ, #. ກອບຂອບສຸດພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້.
GFRP Composite Steel Gully Scupper ຖະຫນົນລົດແລ່ນຕະແກງຍ່າງ, Culvert Conduit Trench ບາຍນ້ໍາ Ditch, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດຫນຽວ Iron Manhole Grid ປົກອ່າງຈັບ, ຄວາມປອດໄພຂະຫຍາຍໂລຫະ Grating, ຫນັກຍົກເວັ້ນພາສີ Grip ບາຍ Channel, ລະນຶກແບບປຸແອອາລູມິນຽມການໄຫຼ, ຍົກ Access Floor ທາງຍ່າງທາງຕີນ, ເດີ່ນ Ramp Edging. pedestal, Carbon ເປັນແສກແຂ້ວເລື່ອຍບາເຫຼັກ, ພາທະນາຍຄວາມກະຕັນຍູຕິດຕັ້ງ Saddle Clip ລັອກ clamp Fastener ມໍລັອກເຫຼັກຕິດຕັ້ງປີ້ງກະດານ, formwork ຜູກຄັນ Wing ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ, ເດັກຫລວງ ductile ເຫລໍກທໍ່ເສັ້ນໃຍຫລວງຊິນ, lid ປິດຂຸມຊາຍ tank ໄດ້. ຮວບຮວມ, ປົກຄຸມ, ຖັງນໍ້າປະປາ, ຝາປິດ, ຖົງ Biscuit ການຮູ້ບຸນຄຸນ, Great Tasting, ເຫຼັກ grill lid ການເຂົ້າເຖິງຕົວ, ກອບປີ້ງປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ. ກວມເອົາດັງຂອບແຜງ cover slippery stairs ຕິດຕາມ rod ຍ້າຍ U ລະບາຍ ditch ຕາມຂອບຂອງ sidewalk ໄດ້, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງມາຕຣິກເບື້ອງ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ, ທີ່ມີເຟຣມ, vents, ນ້ໍາ, ເຫຼັກ, torn, folded ຮູ perforated ໄດ້. , ຂ້ອນຂ້າງຍາວເຫຼັກ, ເສັ້ນໄຍກາກບອນ, TROTTERS ໂຄງສ້າງ, ໄກ່, ເດັກນ້ໍາຝົນ, ຍ່າງຄວາມຜິດພາດພຽງ, ລາງລົດໄຟ, ສຸດທິ mini ທີ່ມີກິ່ນຫອມ, block paving, ພາຍນອກຫນອງ koi ຕົກແຕ່ງ, ຈັດສວນ, ກະເບື້ອງ. ເຄື່ອງປັບລະດັບຊັ້ນ, ການຕິດຕັ້ງ DIY ຍ້າຍຕົວທ່ານເອງ, lamps ຕິດຕັ້ງເພດານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ T ພາທະນາຍຄວາມ, ກະເບື້ອງເພດານກ່ຽວກັບກໍາແພງຫີນ, ກໍາແພງຫີນຂອງ curtains gauzy ແສງສະຫວ່າງ opaque ໄດ້. ຮົ້ວຫມວດຫມູ່ຄະນະກໍາແພງ ຜົນປະໂຫຍດຕົກແຕ່ງເພດານເຮືອນຍອດ hinge slat ມ່ານ Fiat cedar breeze pergola, ປ້ອງກັນສັດປີກ cover mesh, ງູ, ນົກຊະນິດ, ກະຮອກ baffles ໄລ່ອອກ, ປະກອບເປັນຫມູ່ຄະນະແບ່ງປັນ. Delight, polycarbonate, vinyl, block ຫ້ອງການ, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ອາກາດຫນາວສໍາເລັດໄປລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດ, ສາຍໄຟ, ຫ້ອງ divider, ສູງເກຣດ. ແກນລະບາຍລົມໂຄງສ້າງເພດານທີ່ໂຈະ, Splashboard / Weatherboard / Slat ມ່ານ / Trellis ຮົ່ມ, Panels Awning Wall, ສີທົ່ວໄປ Sun Partition ຫນ້າຈໍ, Anti-Bird Control Netting, Mini ຕົກແຕ່ງ Grating Curtains, ປະຕິມາກໍາການປົກຫຸ້ມຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ເປີດເພດານສັບມືຖືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ສະຖານທີ່ຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຊຸບເປີມາເກັດ, ໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່. ຫ້ອງນ້ໍາ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ໂຮງງານຜະລິດຕົກແຕ່ງໃຫມ່, ແຜງເພດານ, ຝາຂີ້ເຫຍື້ອ ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ tovas canopy roof ຮົ້ວ, ກໍາແພງຫີນ, ກໍາແພງ, ຜ້າຄຸມພື້ນ, ຕາບອດ, ຜ້າມ່ານແສງສະຫວ່າງ ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກຝຸ່ນທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນຫນອງຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອອາຫານ, ໃບເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ນ້ໍາຝົນ Trench scupper ຂີ້ຝຸ່ນຫນ້າຈໍຂັບຂີ່ຖະຫນົນຫົນທາງຖະຫນົນຫົນທາງທາງດ່ວນ, trapper ໃບແກງ scupper ຄວາມປອດໄພການຈະລາຈອນລະບາຍຕາມຂ້າງຂອງທາງດ່ວນປູ gutter ຊ່ຽວຊານ primer ຢາງສໍາລັບທາດເຫຼັກ, PP PVC PE ABS ລອຍນ້ໍາພາດສະຕິກ Grating, ຮ້ານຄ້າທົດແທນແກ້ວອຸປະສັກຜ້າອັດດັງ, ອາຄານ, ຝາ, cladding ພາຍນອກ, ສັນຍາແຜ່ນພື້ນ. ຕີນ, paving, ການສະຫນັບສະຫນູນສິນຄ້າຈາກສາຍແອວ conveyor, ພູອື່ນໆແລະສວນ. ສາຍທໍ່ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການອອກແບບທີ່ຈະເລືອກຈາກ. ສາມາດຕັດແລະຕົກແຕ່ງເປັນເຟີນິເຈີ, stencil, ກໍາແພງ, stencil, ອົງປະກອບອອກແບບ, ສວຍງາມແລະເປັນເອກະລັກ. ອະລູມິນຽມຄອມໂພສິດ, ອົງປະກອບ, F. RP, corrosion ທົນ rust, ຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ, ອາຊິດ, ເປັນດ່າງ, ສານເຄມີ, ພະລັງງານການປະຫຍັດ, ບໍ່ມີອາການບວມ, ປອດສານພິດຫນ່ວງທີ່ບໍ່ແມ່ນໄຟ, ໃຍແກ້ວຫລືໄຟເບີກາດພິເສດ. ສິ່ງທີ່, Fibergrate, Strongwell, Webforge,
ແກະສະຫລັກແກະສະຫຼັກແກ້ວສະຫນິມເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບສະຖານະການທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ສະຫວ່າງ, ບ່ອນທີ່ການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ. ຮວບຮວມເຫລໍກທີ່ອ່ອນໂຍນແມ່ນການປຽກຊຸ່ມຊື້ນຮ້ອນໃນອາບນ້ໍາສັງກະສີ. ຄວາມບໍລິສຸດຂອງສັງກະສີທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການປຽກຊຸ່ມຊື້ນຮ້ອນຈະປະສົມປະສານ 99.95%. ການເຄືອບສັງກະສີຈະເປັນຄືຕໍ່ IS-3202 / IS-4759 / IS-2629 / IS – 2633 / IS-6745, ASTM -A -123 ຫຼືທຽບເທົ່າກັບມາດຕະຖານລະຫວ່າງປະເທດ. ຮູບລັກສະນະຂອງພື້ນຜິວເປັນທໍາມະດາຫຼືເປັນແສກແຂ້ວເລື່ອຍເຫຼັກ Galvanized grating ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການປູກອຸດສາຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍທົ່ວໄປເຊັ່ນດຽວກັນກັບອາຄານພານິດ, ມັນມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກ້ວາງເປັນ walkways, ເວທີ, ສິ່ງກີດຂວາງຄວາມປອດໄພ, ການປົກຫຸ້ມຂອງການລະບາຍແລະແກງລະບາຍອາກາດ. ມັນຍັງເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເປັນພື້ນເຮືອນຂອງ mezzanine ເນື່ອງຈາກມັນສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດດຽວກັນເປັນພື້ນທີ່ແຂງທຽບເທົ່າ. ຫຼາຍກ່ວານັ້ນ, ຄວາມເປີດປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງມັນເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ, ຄວາມສະຫວ່າງ, ຄວາມຮ້ອນ, ນ້ໍາແລະສຽງ, Materiales: Steel ເສັ້ນກາກບອນ ການປິ່ນປົວດ້ານ: ຮ້ອນ EASY-ຊຸບສັງກະສີ, ໃນທີ່ມີຢູ່ເບົາຫນັກແລະ, ທີ່ມີຢູ່ໃນ, ເຊື່ອມ, ການຜະລິດຊາຍແດນຕິດກັບກົດຫລືຕື່ມ Swaging Lock ລ້າງ mount ກໍ່ສ້າງSTEEL Grating ຄຸນນະສົມບັດທີ່ :.* ສາມາດໄດ້ຮັບການຊື້ໃນຂະຫນາດຂອງສິນຄ້າຫຼືກໍາຫນົດເອງເພື່ອຕອບສະຫນອງໂຄງການຂໍ້ກໍານົດ. * ພາລະດີຄວາມສາມາດຮັບຜິດຊອບ * ລະບາຍອາກາດຂອງ ອາກາດ, ແສງສະຫວ່າງ, ສຽງ * ຢ່າໄດ້ເກັບກໍານ້ໍາແລະ debris * ຊີວິດການບໍລິການຍາວ * ລະດັບກ້ວາງຂອງພື້ນທີ່ເປີດ * Galvanized ຮູ້ບຸນຄຸນເຫຼັກມີພື້ນຜິວ unmatched. ມັນຍັງເປັນການທົດແທນທີ່ຖາວອນສໍາລັບຂີ້ເຫຍື້ອແລະສາຍທໍ່ລຽບ. * ມັນມີຢູ່ໃນຫລາຍຮູບແບບແລະທາງເລືອກທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. * ການອອກແບບການຕໍ່ຕ້ານການລັກ – ການປົກຫຸ້ມຂອງແລະການກອບແມ່ນການຮ່ວມມືກັບ hinge ສະຫນອງຄວາມປອດໄພ, ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມສະດວກເປີດ. * ຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ: ຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງສູງກວ່າທາດເຫຼັກ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບສະຫນາມບິນ, ສະຫນາມບິນ, ສະພາບອາກາດຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະອື່ນໆ. ຜະລິດຕະພັນເຫຼັກກ້າແກ້ວປະເພດແກ່ນ:
# ກັນລື່ນຂົວພື້ນລະບຽງ # ຂົວທາງຍ່າງ ລະບົບ # ບາຍນ້ໍາ # ເວທີລົດໄຟ # ເວທີມະຫາຊົນຜ່ານ # ນ້ໍາແລະສຽງດັ່ງກ່າວ # ລອຍ # ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດພາດພຽງ walkways ຂຸມ # ບໍ່ແມ່ນ skid ການປົກຫຸ້ມຂອງເວທີໄມ້ທົນທານຕໍ່ # ຄວາມຜິດພາດພຽງ # ເວທີທົ່ວໄປ Industries # ລົດ # Vault ການປົກຫຸ້ມຂອງ. ນ້ໍາເສຍລະບົບບໍາບັດທີ່ຈະປຽກໂປເຟດຊັ່ນ grating # # # treads ໄດ້, Stair
Bar ເຊື່ອມເຫຼັກແມ່ນ HotDipGalvanized, gratings grating ຄີລັອກຄລິບ Table Saddle Clamp ດັດ on Fastener Fastenal | ຄລິບລັອກແຜ່ນການຮູ້ບຸນຄຸນ.ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ໃນສອງວິທີ: * ການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຖາວອນຂອງການຖອນ / ລ້າງ. Bar Grating ຈະໄດ້ຮັບການເຊື່ອມໂລຫະກັບຫນ້າໂລຫະທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຢູ່ແຈແຕ່ລະມຸມ. ການເຊື່ອມໂລຫະ Fillet ແມ່ນຕ້ອງການໃນເວລາທີ່ weld ຍາວຫຼາຍກ່ວາ 20mm ແລະສູງກວ່າ 3mm. ຄີບຕິດຕັ້ງຈະບໍ່ທໍາລາຍການເຄືອບສັງກະສີແລະງ່າຍທີ່ຈະເອົາອອກ. ກະດານແຕ່ລະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຢ່າງຫນ້ອຍສີ່ແຜ່ນຕິດຕັ້ງ. ສໍາລັບກະດານຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ດີກວ່າບາງຄລິບເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອແກ້ໄຂການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ເຫມາະສົມ.
ການຮວບຮວມເປັນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ, ຂະຫນານ, ຂະຫຍາຍຕົວ. gratings ປົກກະຕິແລ້ວປະກອບດ້ວຍຊຸດດຽວຂອງ ອົງປະກອບຍາວ, ແຕ່ສາມາດປະກອບດ້ວຍສອງຊຸດ, ໃນກໍລະນີທີ່ກໍານົດໄວ້ວິນາທີປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ perpendicular ກັບຄັ້ງທໍາອິດໃນເວລາທີ່ທັງສອງຊຸດຕັ້ງສາກ, ນີ້ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືຕາຫນ່າງ.
A ລະຫັດສິນຄ້າຄອບຄຸມບາຍນ້ໍາສາມາດເປັນ ການເກັບກໍາ bars ທາດເຫຼັກ (ເຊັ່ນດຽວກັນ, ອົງປະກອບຍາວ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຮ່ວມກັນ (ເພື່ອຮັບປະກັນຫລັກການຄ້າຍຄືກັນແລະຫ່າງກັນເປັນປົກກະຕິ) ໂດຍກອບທາດເຫຼັກເບົາບາງລົງ. ຄວາມກະຕັນຍູໃນໄລຍະລະບາຍແລະລະບາຍອາກາດທາງອາກາດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ເປັນການກັ່ນຕອງ, ຈະຕັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອະນຸພາກຂະຫນາດໃຫຍ່ (ເຊັ່ນ: ໃບ) ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍ (ເຊັ່ນ: ນ້ໍາຫຼືອາກາດ).
ຕາຂ່າຍເຫລໍກຕ້ານການລົ່ນເຫລັກແມ່ນປະເພດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຕາຫນ່າງເຫຼັກແມ່ນຜະລິດຢູ່ໃນຫຼາຍວິທີ. ຕາຂ່າຍແຖບເຊື່ອມຕໍ່ປະກອບດ້ວຍແຖບການໂຫຼດໄຟຟ້າທີ່ຖືກເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຖບ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມກົດດັນຫຼືລັອກ, ບ່ອນທີ່ໂລ້ເຫຼັກຖືກບັງຄັບຜ່ານແລະລັອກຢູ່ໃນແຖບໂຫຼດ. ຮວບຮວມຂອງແຖບແມ່ນບ່ອນທີ່ແຖບການໂຫຼດແມ່ນ riveted ກັບແຖບຂ້າມ. ມີຊື່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຊື່ການຄ້າສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດທີ່ຜະລິດ. ປະເພດໂລຫະແຜ່ນ: Perforated metal sheet sheet made of diamond. ຕົວຢ່າງຂອງຊື່ການຄ້າແມ່ນ Grip Strut, Diamond Grip, Ry, Diamond, Grip Span, Deck Span, Grip Track. ແຜ່ນໂລຫະແຜ່ນເຈາະຕະຫຼອດຮູ. ຕົວຢ່າງຂອງຊື່ການຄ້າແມ່ນ Perf-o-Grip, Safety Grip, Shur Grip, Ry Grip, Open Grip ແລະ Grate Lock. ໂລຫະແຜ່ນຫນາແຫນ້ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງຂອງຊື່ການຄ້າແມ່ນ Tread Traction, Tread ຄວາມປອດໄພ, Shur Step, Ry-Tread ແລະ Tread Grip. ຄຸນລັກສະນະຂອງຕົນເອງທໍາຄວາມສະອາດທີ່ດີເລີດຂອງຕາຫນ່າງທໍາມະດາເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໃນເວລາທີ່ມີນ້ໍາຫຼືວັດສະດຸທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜິວເທິງຂອງຂີ້ເຫຍື້ອກາຍເປັນຄວາມຊຸ່ມຫຼືລື່ນ, ຄວນພິຈາລະນາຂໍ້ກໍານົດຂອງຫນ້າດິນທີ່ເຫມາະສົມ. ໃນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນກໍານົດ, ຄວາມເລິກຂອງແຖບລູກປືນຕ້ອງມີຂະຫນາດ 1/4 ນິ້ວກ່ວາຂະຫນາດທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງການໂຫຼດເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງທຽບເທົ່າຂອງ gratings ທີ່ບໍ່ແມ່ນສາຍ. ຄວນພິຈາລະນາຂໍ້ກໍາຫນົດດ້ານຫນ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນກໍານົດ, ຄວາມເລິກຂອງແຖບລູກປືນຕ້ອງມີຂະຫນາດ 1/4 ນິ້ວກ່ວາຂະຫນາດທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງການໂຫຼດເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງທຽບເທົ່າຂອງ gratings ທີ່ບໍ່ແມ່ນສາຍ. ຄວນພິຈາລະນາຂໍ້ກໍາຫນົດດ້ານຫນ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນກໍານົດ, ຄວາມເລິກຂອງແຖບລູກປືນຕ້ອງມີຂະຫນາດ 1/4 ນິ້ວກ່ວາຂະຫນາດທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງການໂຫຼດເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງທຽບເທົ່າຂອງ gratings ທີ່ບໍ່ແມ່ນສາຍ.
Metal Bar Grating ແມ່ນມຸງຂອງຕະຫຼາດພື້ນເຮືອນອຸດສາຫະກໍາແລະໄດ້ຮັບການອຸດສະຫະກໍາອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບຫລາຍສິບພັນປີ. ໃນລະດັບຄວາມທົນທານແລະມີອັດຕາສ່ວນຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຫນັກຫນ່ວງ, ແຖບໂລຫະໂລຫະສາມາດຜະລິດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. bar ກໍາລັງປະຕິບັດການບໍາລຸງຮັກສາແບບປະສົມປະສານແລະຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດແມ່ນມີການປຸງແຕ່ງຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນອອກແບບມາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຫຼາຍຢ່າງ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສໍາລັບໂຄງການຕ່າງໆ, ເຊິ່ງຕັ້ງແຕ່ຂີ້ເຫຍື້ອແລະ stairs treads ກັບ decking ແລະພື້ນເຮືອນເຫຼັກ. ການນໍາໃຊ້ເປັນຂີ້ເຫລໍກໂລຫະ, ແຖບຮວບຮວມຢູ່ໃນພື້ນເຮືອນທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງ, ແຫຼວ, ອາກາດ, ຄວາມຮ້ອນແລະສຽງທີ່ຈະຜ່ານລະດັບຊັ້ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບໍລິສັດອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ວາງແຖບເລື່ອນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໃຊ້ເປັນພື້ນທີ່ສໍາລັບເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້ແລະຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ແຖບສະແຕນເລດເຫຼັກຂອງພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ນອນໃນເວລາຍ່າງແລະ Titeweld ຂອງພວກເຮົາບໍ? ການສະແກນແຖບເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບ “roll-a-bility” ສູງສຸດເມື່ອລໍ້ເຫຼື່ອນ, ລົດໃຫຍ່, ລົດຍົກຫຼືລົດແມ່ນໃຊ້. ຢູ່ທີ່ໂລຫະໂດຍກົງ, ຂີ້ຝຸ່ນອາລູມິນຽມຂອງພວກເຮົາແລະປະເພດຕ່າງໆຂອງເຫຼັກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ແຖບຜະລິດຕະພັນແຖບຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງອາລູມິນຽມແລະເຫຼັກກ້າແມ່ນຫຍັງ? ເບິ່ງຂໍ້ມູນຂົ້ວໂລຫະຂ້າງລຸ່ມນີ້!
Aluminum Bar Grating ເປັນຕົວເລືອກທີ່ດີເມື່ອມີວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ອ່ອນແອ. ເລືອກເອົາຕົວເລືອກຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ທາງເທີງ flush, ແຖບມຸມສາກ, plank, & I bar. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອາລູມິນຽມແມ່ນມີຢູ່ໃນ swing ລັອກ, ຄວາມກົດດັນ locked (dove tail) ແລະການອອກແບບ riveted.
ຄາບອາຍແກັສກາກບອນ ເປັນຕົວເລືອກທີ່ດີໃນເວລາທີ່ໂຄງການຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອຸປະກອນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະທ່ານຈະບໍ່ສະແດງຂີ້ເຫຍື້ອກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນການກັດກ່ອນ. ເລືອກຈາກພື້ນທໍາມະດາຫລືຫນາແຫນ້ນ, ປະຕິກິລິຍາເຄືອບ, ມາດຕະຖານສີດໍາ, ເຫຼັກສະແຕນຫຼືສີດໍາທີ່ມີສີແສງຫຼືຫນັກ.
ແກນສະແຕນເລດສະແຕນເລດສະ ຫນອງອຸປະກອນທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນແລະທາດອາຍແກັສໃນວັດສະດຸທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າອາລູມິນຽມ. Steel Bar Grating
Grating Tread Bar Grating ມັກຈະສະຫນອງໃຫ້ໃນການກໍ່ສ້າງ welded ແລະຖືກເຮັດດ້ວຍທໍ່ທີ່ຖືກເຊື່ອມໂລຫະໃສ່ແຂນດ້ານເທິງ.
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສະຖາປັດຍະກໍາ ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາແລະການກໍ່ສ້າງ. ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບໂຄງການຕ່າງໆຈາກການແດດ, ຮົ້ວ, ການກໍ່ສ້າງຫນ້າດິນ, ເສັ້ນທາງຍ່າງ, ແກງໄມ້ປະດັບຫຼືໂຄງການທີ່ຫນ້າສົນໃຈ.
ອຸປະກອນຮວບຮວມຕິດຕັ້ງແຖບ ສະຫນັບສະຫນູນຂອງມັນ. ພວກເຮົາສະເຫນີຄລິບເກີບ, ທ່ອນຍັກ, ຄລິບແຜ່ນ, ດິນທີ່ມີນ້ໍາຖ້ວມ, ສາຍເຄເບີ້ນ, ຄລິບ z, ແລະແຜ່ນກະດານ. ຫລາຍມາຍມີຢູ່ໃນອາລູມິນຽມ, ເຫຼັກສະແຕນເລດແລະເຫຼັກກ້າ galvanized.
ປະເພດຜະລິດຕະພັນເຫຼັກກ້າ ແມ່ນຜະລິດຈາກ ASTM ເຫຼັກຄາບອນຫນ້ອຍແລະມີຢູ່ໃນສາມຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ປະເພດ “W” ລະບົບແຖບສະຫຼັດ, ພິມ “DT” ຄວາມກົດດັນຂອງແຂນທີ່ຖືກລັອກລັອກ, ແລະພິມ “SL” swage locked grating. ຜະລິດຕະພັນທັງສາມສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບແຖບຊ່ອງຫວ່າງໃນພື້ນທີ່ແລະກາງຜ່ານສູນກາງ. ຜະລິດຕະພັນແຕ່ລະຄົນມີພື້ນທີ່ປົກກະຕິມາດຕະຖານຫຼືອາດຈະຖືກກໍານົດໄວ້ດ້ວຍເສັ້ນທາງເສັ້ນລຽບຫຼືດ້ານຫນ້າຂອງ Algrip. ທາງເລືອກໃນການສໍາເລັດຮູບປະກອບດ້ວຍເຫລໍກທີ່ເປົ່າ, ສີ, ເຄືອບຮ້ອນ, ຫຼືເຄືອບພິເສດ. ຕາຕະລາງໂຫຼດຂອງແຖບເຫຼັກເຫຼັກສະຫນອງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້. Type “W” Welded Steel Grating
ຜະລິດຕະພັນເຫລໍກທີ່ປະຫຍັດຫລາຍທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ປະເພດ “W” ທໍ່ເຫຼັກ welded ແມ່ນຜະລິດໂດຍການ forge welding ແຖບຮັບຜິດຊອບມຸມສາກແລະແຖບຂ້າມກັນ. ຂະບວນການການເຊື່ອມໂລຫະນີ້ສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສົມບູນແບບທີ່ສົມບູນແບບໃຫ້ແກ່ການບໍລິການຫລາຍປີພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ. ປະເພດ “W” ໂລຫະເຫຼັກແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາແລະແນະນໍາສໍາລັບເກືອບທັງຫມົດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງອຸດສາຫະກໍາ. ມີພື້ນທີ່ເປີດກວ້າງເກືອບ 80%, ປະເພດ “W” ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບ passage ງ່າຍໆຂອງຝຸ່ນ, debris, ຫິມະ, ແລະນໍ້າສະອາດແລະທໍາມະຊາດຕົນເອງທໍາຄວາມສະອາດ. ຮວບຮວມປະເພດ “W” ມີຢູ່ໃນຕາຫນ່າງທີ່ໃກ້ຊິດ, spacings ສອດຄ່ອງ ADA, ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນເຂດພື້ນທີ່ສາທາລະນະ. ໃນເວລາທີ່ກໍານົດປະເພດ “W” ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ADA, ແຖບປ້ອນຫນາຕ້ອງໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້.
ຊະນິດ “ໄດ້ DT” Steel Deep, gratings ມີການ Rectangular Cross ແລະບາກໍາລັງການຜະລິດໂດຍການແຊກເກິດສໍາລັບ punched, ທາງສ່ວນຫນ້າຂອງບາບາແລະ Cross Into ເປັນ “ໄຂ່ Crate” ການຕັ້ງຄ່າພິການແລະການບາ Cross ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນໄຮໂດລິກ. ແຖບເລິກທີ່ສຸດໃນປະເພດ “DT” gratings ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທີ່ນິຍົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສະຖາປັດຍະກໍາເຊັ່ນ: ແດດບ່ອນທີ່ມີຮົ່ມແດດແລະແຜ່ກະຈາຍດ້ານຂວາທີ່ມີແຖບເລິກກວ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງຫມາຍການສະຖາປັດຕະແຕກຕ່າງກັນ. ປະເພດ Swing ປະເພດ Grating ປະເພດ “SL” Swage
ປະເພດເຫລໍກສະແຕນເລດເຫຼັກ “SL” ເຫຼັກແມ່ນຜະລິດໂດຍການໃສ່ທໍ່ທາງຜ່ານທໍ່ຫລຸມເຂົ້າໄປໃນຮູປະຕູຮົ້ວໃນແຖບປະກອບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນແຖບຂ້າມແມ່ນກາຍເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກທາງບວກ. ແຖບຂ້າມແມ່ນຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງດ້ານເທິງຂອງແຖບທີ່ມີການສະແດງຮູບແບບສະຖານະພາບແບບດັ້ງເດີມແລະຫນ້າສົນໃຈ. Locking Swage ແມ່ນຂະບວນການທີ່ມີປະສິດຕິຜົນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການຜະລິດແກ້ວຕາຫນ່າງທີ່ໃກ້ຊິດ. ປະເພດ “SL” ແຖບປອກເປືອກຫນາສະຫນອງການເປີດທີ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງແຖບປືນ. ການເປີດກວ້າງນີ້ມັກຈະມັກຢູ່ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະທີ່ຄວາມກັງວົນຂອງການລະບາຍນ້ໍາແລະການມີເກີບທີ່ມີເກີບສູງ. ຕາຂ່າຍໂລຫະຂະຫຍາຍແລະຕາຂ່າຍ:
ຕາຂ່າຍໂລຫະຂະຫຍາຍຫຼືຕາຫນ່າງໂລຫະທີ່ຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນວິທີການປະຕິບັດແລະປະຫຍັດທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມປອດໄພແລະພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ແມ່ນ skid. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນການຂັບຂີ່ຂອງໂຮງງານ, ເວທີການເຮັດວຽກແລະປ້າຍໂຄສະນາ, ຍ້ອນວ່າມັນຖືກຕັດເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີແລະສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ຢ່າງໄວວາໂດຍການເຊື່ອມໂລຫະຫຼື bolting. ຕາຫນ່າງສາຍ, ທີ່ເອີ້ນວ່າຜ້າສາຍຫຼືຜ້າສາຍ, ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໂລຫະທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນທົ່ວໂລກ. ຈາກການອຸດສາຫະກໍາການນໍາໃຊ້ການຄ້າ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກແມ່ນຜະລິດຕະພັນໂລຫະທົ່ວໄປທີ່ນໍາໃຊ້ທຸກໆມື້. ຕາຫນ່າງອາລູມິນຽມ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກແລະຕາຫນ່າງທອງເຫຼືອງແມ່ນບັນດາລາຍການປະເພດຂອງວັດສະດຸຕາຫນ່າງເຫຼັກທີ່ປະກອບດ້ວຍທອງເຫຼືອງ, ເຫຼັກກ້າ, ເຫຼັກກ່ອນຫນ້າແລະແກ້ວສະແຕນເລດ. ການກໍານົດຄວາມສາມາດຂອງເຫຼັກກ້າຫນັກ:
ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຮູບຮ່າງຂອງພາທະນາຍຄວາມ 1 .: ພິມທໍາມະດາ (ຍົກເວັ້ນອາດຈະໄດ້ຮັບໃນການສັນຍາລັກ A Of Steel Grating), ປະເພດ Serrated ແລະຂ້າພະເຈົ້າ, ຮູບຮ່າງປະເພດຮູບຮ່າງ
2 Pitches ສາມາດສັ່ງເຮັດ Bearing ເປັນພາທະນາຍຄວາມ, ການທີ່ 30mm ແລະ 40mmare ແນະນໍາ. 3. ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງຂອງແຖບເສັ້ນຜ່ານສູນກາງ 100 ມມ. 4. ດ້ານການປິ່ນປົວດ້ານຫນ້າ: ການໃຊ້ແກະສະຫຼັກທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ, ສີຫຼືສານເຄືອບຕ້ານ corrosive ອື່ນໆທີ່ມີຢູ່, ຊຶ່ງເປັນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການໃຊ້ galvanizing ຮ້ອນ.5ວັດສະດຸ: ASTM A36 / SS235JR / SS400 / Q235B
6. ຄວາມທົນທານຄວາມເສື່ອມເສີຍຂອງຄວາມຍາວທີ່ຖືກອະນຸຍາດແມ່ນ +0/ -5 ມມ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກວ້າງຂອງຄວາມກວ້າງແມ່ນ +/-5ມມ. ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງແຖບເລື່ອນແມ່ນບໍ່ເກີນ 10% ຂອງຄວາມກວ້າງຂອງແຖບຮັບຮອງ. ດ້ານຫນ້າຂອງແຖບບໍ່ຄວນຈະລື່ນເກີນ 1 ແມັດດ້ານຫນ້າ, ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນແລະສຸດທ້າຍຂອງແຖບບໍ່ຄວນຈະລື່ນກວ່າດ້ານປາຍຂອງສອງດ້ານຂອງຕາຂ່າຍ 2mm. ຜະລິດຕະພັນໂລຫະຂອງພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ໃນການໃຊ້ງານຕ່າງໆຈາກອຸດສາຫະກໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ. ເລືອກຈາກຮູບແບບສະຖາປັດຕະຍະຂອງພວກເຮົາໃນຕາຫນ່າງເຫຼັກ, perforated, ຂະຫຍາຍຫຼືກໍາລັງ. WIRE MESH
ຜະລິດຕະພັນສາຍແມ່ນ versatility, ປະຫຍັດແລະຫນັກ. ພວກເຂົາກໍ່ສາມາດຖືກດັດແປງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນພຽງແຕ່ໂຄງການອຸດສາຫະກໍາຫຼືສະຖາປັດຕະ. ວັດສະດຸປະກອບດ້ວຍ: ເຫຼັກຄາບອນ, ເຫຼັກແຕນເລດ, ເຫຼັກກ້າແລະໂລຫະປະສົມ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມາໃນຮູບແບບສະຖາປັດຕະຍະກໍາຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບໂຄງການຂອງທ່ານ. ເລືອກຈາກຮູບແບບປະສົມປະສານໂລຫະປະສົມ, ຕາຫນ່າງຮູບຊົງ, ຮູບຊົງ, ຂີ້ຝຸ່ນກັບຕາຫນ່າງຕາຫນ່າງສູງແລະຮູບແບບຕາຫນ່າງຂອງລູກຄ້າ. ຕາຫນ່າງສາຍແມ່ນມີເສັ້ນໃຍຮຽບຮ້ອຍ, ລຽບແລະຮອບ – ແລະຢູ່ໃນສາຍຕາທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະ multifunctional.
ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ Metal perforated ແມ່ນຫຼາຍ versatile ແລະ lightweight ແລະມາໃນຮອບ, ຮຽບຮ້ອຍ, slotted ແລະການອອກແບບ perforations. ບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງສະຖາປັດຕະການປະກອບມີ sunscreens, panels ເພດານ, cladding exterior ຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຮູບແບບທີ່ຫນ້າສົນໃຈ esthetically.
The METAL ຂະຫຍາຍ ການຂະຫຍາຍການໂລຫະແມ່ນປະຫຍັດທີ່ສຸດ. ມັນກໍ່ສາມາດຖືກດັດແປງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນພຽງແຕ່ໂຄງການໂລຫະຖາປັດຕະຍະ. ທ່ານຈະພົບກັບຮູບແບບແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ເລືອກຈາກ. ມີຢູ່ໃນແປຮູບຫຼືມາດຕະຖານ.
ກະປ໋ອງ Bar ໄດ້ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາແລະການກໍ່ສ້າງ. ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບໂຄງການຕ່າງໆຈາກການແດດ, ຮົ້ວ, ການກໍ່ສ້າງຫນ້າດິນ, ເສັ້ນທາງຍ່າງ, ແກງໄມ້ປະດັບຫຼືໂຄງການທີ່ຫນ້າສົນໃຈ.
ຕາຫນ່າງເຫຼັກກ້າ, ຊຶ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພາຍໃນອາຄານອຸດສາຫະກໍາແລະພູມສັນຖານທັງຫມົດທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ. ນອກຈາກນີ້ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນຂີ້ເຫລໍກໂລຫະ, ສະຫວ່ານເຫຼັກອະນຸຍາດໃຫ້ທາງອາກາດ, ຄວາມສະຫວ່າງ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະແຫຼວເປັນສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການຄັດເລືອກສິ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການແລະຂີ້ເຫຍື້ອໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ນ້ໍາຖ້ວມ, ທໍ່ນ້ໍາຝົນ, ນ້ໍາຈືດແລະນ້ໍາຮົ້ວຕາມປົກກະຕິແມ່ນມີທໍ່ເຫລໍກ. ຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນມີປະໂຫຍດສໍາລັບພື້ນທີ່ອຸດສາຫະກໍາແລະພື້ນເຮືອນໃນໂຮງງານຜະລິດສານເຄມີ, ສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງອາຫານແລະໂຮງກັ່ນນ້ໍາມັນແລະກ໊າຊ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄົນເບີ່ງເບີ່ງຂື້ນຢູ່ໃນຂີ້ເຫຍື້ອໃນເສັ້ນທາງຍ່າງທາງ, ແລະຢູ່ໃກ້ກັບນ້ໍາພຸແລະຕົ້ນໄມ້.
ຕາຫນ່າງສາຍ, ທີ່ເອີ້ນວ່າຜ້າສາຍຫຼືຜ້າຜ້າສາຍ, ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໂລຫະທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນທົ່ວໂລກ. ຈາກການອຸດສາຫະກໍາການນໍາໃຊ້ການຄ້າ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກແມ່ນຜະລິດຕະພັນໂລຫະທົ່ວໄປທີ່ນໍາໃຊ້ທຸກໆມື້. ຕາຫນ່າງອາລູມິນຽມ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກແລະຕາຫນ່າງທອງເຫຼືອງແມ່ນບັນດາລາຍການປະເພດຂອງວັດສະດຸຕາຫນ່າງເຫຼັກທີ່ປະກອບດ້ວຍທອງເຫຼືອງ, ເຫຼັກກ້າ, ເຫຼັກກ່ອນຫນ້າແລະແກ້ວສະແຕນເລດ. ກົດທີ່ Wire Mesh Material Types ຂ້າງລຸ່ມນີ້. Welded Wire Mesh
ຕາຫນ່າງເຫຼັກທໍ່ລວດປະກອບດ້ວຍສາຍສາຍເສັ້ນປະກົດມຸມທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມໂລຫະຢູ່ທາງຕັດກັນ. ເສດຖະກິດແລະສະດວກສະບາຍ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ welded ຂອງພວກເຮົາມີຮູບລັກສະນະທີ່ສະອາດແລະຮູບແບບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ເປັນເອກະພາບ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອຸປະສັກຄວາມປອດໄພ, ຮົ້ວຄວາມປອດໄພ, ບັນຈຸຂີ້ເຫຍື້ອ, ການເສີມສໍາລັບການໂຫຼດຫນັກແລະຕົມແລະສັດລ້ຽງ.
ສາຍ Woven Wire Mesh Wire Mesh ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຜ້າຜ້າ, ດັ່ງທີ່ມັນຖືກທໍຢູ່ເທິງແຜ່ນໂລຫະທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜ້າຜ້າ. ອຸປະກອນການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງຕາຫນ່າງຕ່ອງໂສ້ຕ່ໍາປະກອບດ້ວຍເຫລໍກຄາບອນ, ເຫລໍກສັງກະສີແລະສະແຕນເລດ. PVC Coated Wire Mesh
ການເຄືອບ PVC ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ທົນທານ, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນແລະມີຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນທີ່ດີ. ພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍຕາຫນ່າງເຫຼັກເຄືອບຢູ່ໃນວັດສະດຸຈໍານວນຫຼາຍລວມທັງເຫລໍກຄາບອນແລະເຫຼັກກ້າ.
Mesh Cage Mesh ມ້ວນ ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຈໍານວນເມັດທີ່ສອດຄ່ອງແລະເປັນເອກະພາບສໍາລັບຖັນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂະຫນາດ. ພວກເຮົາເກັບຕາຫນ່າງເຄືອບທັງສອງປະເພດ galvanized ກ່ອນທີ່ຈະ welding ແລະ galvanized ຫຼັງຈາກການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ມີທັງສີ່ຫຼ່ຽມມົນແລະມຸມສາກ.
ຜ້າ Wire Wire Wire Mesh Wire Mesh Wire Cloth ເປັນເສັ້ນລວດລວດທີ່ປະກອບດ້ວຍເສັ້ນໃຍຫຼືສາຍເຊື່ອມໃນຕາລາງຫລືສີ່ຫລ່ຽມມຸມສາກ. ມັນມີຢູ່ໃນເຫຼັກກ້າ, ເຫຼັກສະແຕນເລດແລະເຫລໍກທີ່ເປົ່າ, ແລະມັນມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຜ້າຮາດແວນອກ. Hex Netting
ການຫັກ hex ແມ່ນເປັນຕາຫນ່າງເຫຼັກເຫຼັກບິດທີ່ມີ open hexagonal. Wexnetting ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຢູ່ໃນສອງຂະຫນາດຕາຫນ່າງທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຂອງ width ແລະຄວາມຍາວ. ມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະຮົ້ວຕາຫນ່າງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ນໍາໃຊ້ເລື້ອຍໆເພື່ອກໍ່ສ້າງກ້ອນຫີນຫຼືຮົ້ວລວດອື່ນໆສໍາລັບໄກ່ຫຼືສັດອື່ນໆ.
ການກັ່ນຕອງ ຂອງເຫລັກສະແຕນເລດເຄື່ອງລວດເຫຼັກຫນຽວຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີປະໂຫຍດໃນການໃຊ້ງານຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການການເປີດກວ້າງຂະຫນາດນ້ອຍກ່ວາການສະຫນອງໂດຍໂລຫະ perforated, ໂລຫະຂະຫຍາຍຫຼືຕາຫນ່າງມາດຕະຖານ. ຕາຫນ່າງສະແຕນເລດແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການກັ່ນຕອງທີ່ນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ເຊັ່ນ: ການກັ່ນຕອງຂອງເຄື່ອງຈັກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຫຼືການຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກຄວາມດັນສູງ. ສະແຕນເລດເຫລໍກ
ເຫມາະສົມຢ່າງສົມບູນສໍາລັບຈຸດປະສົງສະຖາປັດຍະກໍາແລະການເຮັດວຽກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຫນ້າຈໍເຫຼັກເລດຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ການປິ່ນປົວນ້ໍາມັນ, ສານເຄມີ, ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການບິນ, ການຜະລິດເຈ້ຍ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ໂລຫະ, ອາຫານແລະຢາ.
ຮົ້ວ ຄວາມປອດໄພຮົ້ວຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຄຸກ, ຊາຍແດນຫຼືສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຮົ້ວຄວາມປອດໄພສູງ. ຂອບເຂດຂອງຕາຫນ່າງໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການປີນຂຶ້ນ, ແລະມັນປະຕິເສດການເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງມືໂດຍປົກກະຕິ, ເຮັດໃຫ້ລະດັບການປົກປ້ອງລະດັບສູງ. Wire Mesh Containers
ຕູ້ຄອນເທນເນີຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບແລະສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບຊີວິດການບໍລິໂພກທີ່ຍາວນານ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຈັດການວັດຖຸ. ພວກເຂົາມີຢູ່ໃນຫຼາຍຂະຫນາດແລະຄວາມສາມາດ. ສາມາດຕິດຕັ້ງແລະຖອດໄດ້, ຫມຶກຂີ້ເຫຍື້ອຫນຽວ, ທົນທານ, ທົນທານ, ທົນທານ, ທົນທານ, ທົນທານ, ສະອາດແລະສາມາດສົ່ງຜ່ານໄດ້.
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແບບຖາປັດຕະຍະສາຍຕາແບບຖາວອນ ສາມາດດັດແປງໄດ້ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນໂຄງການສະຖາປັດຕະຍະກໍາໃດໆແລະມີຢູ່ໃນເຫລໍກຄາບອນ, ສະແຕນເລດແລະເຫຼັກກ້າ. ມັນລວມຄວາມງາມແລະການເຮັດວຽກໂດຍການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຫນ້າສົນໃຈ, ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ຄວາມປອດໄພແລະການປະຫຍັດພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. U-Edging
U-Edging ເປັນຜະລິດຕະພັນຕາຫນ່າງເຫຼັກ ເຄຶ່ອງອຸປະກອນທີ່ເປັນກາ u ຮູບທີ່ຕິດຄັດມາກັບແຂບຂອງສາຍແຜ່ນຜະລິດຕະພັນຕາຫນ່າງເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຄມຂອງທີ່ດຶງດູດແລະປອດໄພກວ່າ. ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນເຫຼັກກາກບອນ, ເຫລັກສະແຕນເລດ, ອະລູມິນຽມແລະເຫຼັກ galvanized.
Grating_Manhole_Expert | ຜະລິດຂາຍຍົກ – ຂາຍຍ່ອຍ | ຕົວແທນການທົດແທນທີ່ຂາຍ, ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ ,, ຕົວແທນ, ການຈໍາຫນ່າຍ
CHANCON COMPANYSelect ຈໍາກັດ | GratingThai Co. , Ltd. , || (Head Office, ກົງກັນຂ້າມເຊັນທັນພະຮາມ 2) 199 Soi 21/1 ຟອດ. SMD ທຽນ, ກຸງເທບ, ປະເທດໄທປະເທດໄທກຸງເທບ
ສາຍ @: @iCHANCON Line ໄດ້. (iD ແມ່ນ): ICHANCON
US ເວັບໄຊທ໌: Www.chancon.co.th , Http://GratingThai.com, Http://GratingThai.co.th , http: // Fiberglass Grating – ການ .com pitting ຫລວງທໍ່ຫລວງ.
ໃນ FaceBook: Www.facebook. ການ .com / GratingThai, Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
TwitterShare :. https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconTh
Manhole_Grating_Specialist | ກໍາລັງໄຟຟ້າຂອງເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ fiberglass mesh ຢູ່ແຄມແຂນ. FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING | ຖະຫນົນຍ່າງ ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manholes COVER | ລອຍນ້ໍາຫລາຍເກີນບາຍນ້ໍາ Gully Gutter Grating | ຄລິບລັອກເລືອກຍຶດແຜ່ນ sieve anchoring ອຸປະກອນທີ່ຕິດຄັດມາ Saddle ແກ້ໄຂ Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating | ເສຍຈັ່ນຈັບ sieve ໃບດ້ານຄວບຄຸມຕາມ sidewalk ບາດວິຖີບາຍນ້ໍາ Grating. Scupper | Egg ຜ້າມ່ານກະດານ Crate slatted ປີ້ງ separates ຕັນຫນ້າກາກໄຟຮົ່ມແສງສະຫວ່າງ decorate ຂອງຕູ້ປາ | ກວມເອົາດັງຂອງທ່ານໃນໄລຍະແຂບ trim ໄດກະດານການປົກຫຸ້ມຂອງ. ແຜ່ນພື້ນຜິວພື້ນເສັ້ນໃຍຄວາມຜິດພາດພຽງແກ້ວ FRP Stair Tread ດັງຂັ້ນຕອນປົກ Protector: FRP ຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງ Gritted Plate ແຜ່ນ | plank Winnipeg ຄະນະເຫຼັກ perforated ກໍາແພງ hook ສາຍສຽງວົງເລັບແບບປຸ Pegboard Hook Shelves ເຄື່ອງມື Racking ການເກັບຮັກສາ. DIY Kit | wwwchanconcoth | http: // GratingThaicom | http: // GratingThaicomau | http: // Fiberglass Grate-Steel Pipe Lid | com @ Line: @iCHANCON / Line (iD): iCHANCON | ມືຖື (ຂາຍ): 081 932 7894,061 647 0184-6 ໂທ: 02 451 0780-1
ဂဟေဆော်သံမဏိဘားခြစ် (HotDip သွပ်ရည်စိမ်) သံမဏိပန်းကန် welded ကွက်ပူသို့ကျဆင်းလာသံမဏိချထားတဲ့ပြီးလေ၏။ ရေနုတ်မြောင်းရေကျင်းများအတွက် ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း။
ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူး သွပ်ရည်စိမ်ရဲ့ချောဆန်ခါသံမဏိသံချေးခံနိုင်ရည်သွပ်ရည်စိမ်ရေနုတ်မြောင်း၏စျေးနှုန်း။ တစ်ဦးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းသံမဏိပြားဘားနှင့်အတူသံမဏိလိမ်လိမ်လှံတံကိုစလစ်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Lock ကို Clamp Fastener စွဲစေ Clip panel ကိုသံမဏိ Glass ကို Fiber ခြစ်ကုန်းနှီးသော့ခတ်။
Shannon လေဆိပ်၏သံမဏိကင်အင်္ဂါရပ်တွေကိုလက်စသတ်။ (စံဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်များတွင်လည်းကောင်းအထူ) 1. သံမဏိကင်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူပြီးဆုံး။ 25 စင်တီမီတာနဲ့အရွယ်အစား 30 စင်တီမီတာ2ဦးစံ width ကိုဖောက်သည်တစ်ဦး 50x100cm ချင်လျှင်။ 25cm အသုံးချသို့မဟုတ်အတူတကွနှစ်ခုပြားထားရှိနိုင်ပါသည်။ အမှု၌သင်တို့ကိုအရွယ်အစား 100x100cm 25 စင်တီမီတာခြင်းဖြင့်ချိတ်ဆက်4discs တွေကိုသုံးနိုငျအသုံးပြုချင်။ ဒါမှမဟုတ် 60x100cm လျှင်။ ဒါမှမဟုတ် 100x120cm ။ ဒါဟာပေါင်းစပ်စာရွက် 30x100cm ။ ကောင်းပြီမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်2အရွယ်အစားတစ်ဦးအထူနှင့်အတူ 2. သံမဏိပန်းကန်ထုတ်လုပ်မှုဇယားကွက်။ 3mm ။ နှင့် 5mm ဖြစ်ပါတယ်။ အထူသံမဏိပန်းကန် 3mm ။ အများဆုံးတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိမှာ operate ဖို့ဒီဇိုင်း VW တို့အမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ။ကြီးမားတဲ့နောက်တွဲယာဉ်မှတဆင့်ခြောက်ဘီးထရပ်ကားဘီးမှတဆင့်အပြေး task ကိုအင်အားသုံးအပေါ်ယူနိုင်ရန်အတွက်။ 5mm ၏အထူသင့်ပါတယ်။ ပိုပြီးထက် 25 တန်တစ်ဦးအစွမ်းသတ္တိကိုခဲ့ပြီဒါကြောင့်သေးငယ်နှင့်ထူဖြစ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့တွင်းကြောင့်။
3. ခြစ်ပန်းကန်ဂဟေ သံမဏိကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အတူတကွပေါင်းစည်းဖို့ Twisted လှံတံ 6-8mm ထူသံမဏိပြားလိမ်။ ထိုအခါများတွင်ချော်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ အရေးကြီးသောအချက်ဆက်သွယ်မှုလျှပ်စစ်သံမဏိအရည်ပျော်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းစေသည်ထားတဲ့အတွက် CO2 / MIG ဂဟေနှင့်အတူ welding တို့ကသံမဏိပြားဘားနှင့်အတူတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်သည်များဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်က၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိကိုသက်သေပြရမယ်, အရည်အသွေးအာမခံချက် (လုပ်သားများဂဟေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဂဟေအလုပ်စစ်ဆေးပါ) ။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့် စံအဖြစ်တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့အပေါက်အပေါက်။ အားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ်ပူးတွဲပေါင်းစပ်အဖြစ်အသား။ အထူထက်ပိုမို 75 microns အဘို့, သွပ်စံအဖြစ်ချထားတဲ့။ outlast ဖို့ခွန်အားများနှင့်ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ မှုန်ရေမွှားဆေးသုတ်၏အချို့အစာရှောင်ပြားအပေါ်ယံပိုင်း။
ရောင်းချသူ # 2-အကောင်းဆုံးရဲ့ HDG ,. သွပ်ရည်စိမ်ရဲ့ချော plating သံမဏိရဲ့ကင် welded သံမဏိဆန်ခါ။
Hotdip Shannon လေဆိပ်၏အကြံအဖန်တွေချည်းသံမဏိများတွင်လည်းကောင်းဆက်သွယ်ဘားသံမဏိခြစ်သံမဏိပြားအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး။လျှပ်စစ်သံမဏိအရည်ပျော်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းစေသည်ထားတဲ့အတွက် CO2 / MIG ဂဟေနဲ့တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းသံမဏိပြားဘားနှင့်အတူသံမဏိလိမ်လိမ်လှံတံကိုစလစ်ကွန်နက်ရှင်။ လက်စွဲလုပ်အားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဂဟေဆော်ရန်သေချာစေပါ။ အရည်အသွေးအာမခံချက်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ အဆိုပါဖောက်သည်မတိုင်မီသက်သေပြရမယ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့် စံအဖြစ်တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့အပေါက်အပေါက်။ အားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ်ပူးတွဲပေါင်းစပ်အဖြစ်အသား။ အထူထက်ပိုမို 75 microns အဘို့, သွပ်စံအဖြစ်ချထားတဲ့။ ထက်ချေးဖို့ခွန်အားများနှင့်ခုခံရေး
အထွေထွေ 25 စင်တီမီတာနဲ့ 30 စင်တီမီတာအကျယ်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်း၏စံ့ဒီဇိုင်းကိုပွငျဆငျတစ်ဦးထားရှိရန်သင့်တယ် 25.5 ကနေ 26,0 စင်တီမီတာသို့မဟုတ် 30.5 31.0 မှစင်တီမီတာမှကျယ်ပြန့် ရန်။ အားလုံးချက်ချင်းသုံးစွဲဖို့ထားပြကိုဝယ်ကြလော့။
သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိရဲ့ ” ပူခြစ်အထူး (။ ။ 3mm အထူဘားဖြစ်ပါသည်အဆိုပါ 5mm Vs) ကို manual သို့ကျဆင်းလာ၏ : ထူထပ်သော 3mm, 40×100 mesh ။ -Vs- ။ ထူထပ်သော 5mm, 30×100 mesh 1) သံရေနုတ်မြောင်းထုတ်ကုန်။ စံ 25cm ၏အကျယ်။ ပြီးတော့ 30cm ။ အဆိုပါအရှည် Woodstock ချက်ချင်းကိုစလှေတျ 1 မီတာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းကို item 2) စနစ်များပိုမိုအားကောင်းတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအရည်ဖြစ်ကြ၏။ လျှပ်စစ်သံမဏိအရည်ပျော်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းစေသည်ဖြစ်သောအော်တိုစနစ်, CO2 / MIG ဂဟေဆော်, နှင့် ဆက်စပ်. ။ ဂဟေအဖြစ်ဆန်ခါသံမဏိချောမွေ့ဖြစ်ကြသည်။ သံမဏိဂဟေဆိုင်ထက်နှင့် Bond အစှမျးသတ်တိ , 3) အထူထက်နည်း 75 microns Galvanizing ဟော့သို့ကျဆင်းလာ galvanizing အားဖြင့် coated ။စံ ASTM A123, ASTM B6 ဟာ (rustproof မဟုတ်မှုန်ရေမွှားဆေးသုတ် / ဆေးသုတ်။ ကင်အထွေထွေလုပ်ပါ ဤသည်သံမဏိများတွင်လည်းကောင်းရာသီဥတုအဘို့လွယ်ကူစေသည်, HDG,)
4) သံမဏိဘောင်ကင်အရှိဆုံးသင့်လျော်သောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါသည်နေရာဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ အဆိုပါ minimalistic နှင့်ပေါ့ပါး။ ထို့အပြင်တက်သက်ရောက်နေစဉ်။ သေချာအားလုံးဂဟေကြောင်းစေရန်။ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကိုက်ညီမှု
5) အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများရွေးချယ်ရေး။ သံမဏိ TIS ၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သံမဏိတန်း B သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းကိုမသုံးပါနဲ့။ သငျသညျအပြည့်အဝရင့်ကျက်၏အလေးချိန်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင် ခေတ်မီစက်ယန္တရားတွေနဲ့ကင် နှင့်ဆန်ခါသံမဏိထုတ်လုပ်ခြင်း 20 နှစ်ကျော်အတူနည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့
6) နှင့် 5mm ။ အမြင့် 25mm တစ်ဦးအထူမှာသံမဏိတန်ချိန် 30 အများဆုံးဝန်တွက်ချက်။ , 30mm ကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့အဖွင့်နှင့်အတူ။ရေနုတ်မြောင်းရေကျင်းများအတွက်သင့်လျော်သော အဆိုပါစက်ရုံတွင်ဆန်ကာတင် တစ်ဦးကကြီးမားတဲ့နောက်တွဲယာဉ်, ကွန်တိန်နာသို့မဟုတ်ထရပ်ကားနောက်တွဲယာဉ်မှတဆင့်လုံခြုံစွာသို့ပွေးလေ၏
7) ဦးထက်ပို 25mm တစ်ဦးပခုံးအမြင့်အတူဖောက်သည်ပေး။ တစ်ပိုမြင့်ထိန်သိမ်းသုံးစွဲဖို့မလိုပါ။ ဤသည်သာပခုံးအောက်ခြေအထိအားဖြည့်နေပါတယ်။ ထို့နောက်ဆန်ခါ မော်ဒယ်အထူ 5mm ။ အမြင့် 25mm ။ , 30mm ကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့အဖွင့်နှင့်အတူ။ ဒါဟာကားတစ်စီးနောက်တွဲယာဉ်ပြီးသားကြီးမားခဲ့အတင်းရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ modular ဒီဇိုင်းတပ်ဆင်ထား။
Hotdip ၏အဆင်သင့်စတော့အိတ်အရောင်း Wareshouse ဘားအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး သံမဏိခြစ် အဆင်သင့် Woodstock ။ အချောရဲ့အရွယ်အစားကိုဆက်သွယ်ထားသောသံမဏိပြား 25×100 စင်တီမီတာ နှင့် 30×100 စင်တီမီတာ။
ဆန်ခါအရွယ်အစား 25×100 စင်တီမီတာနှင့် 30×100 စင်တီမီတာအရွယ်အစားစံနှုန်းဖြစ်ပြီးစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ, ချက်ချင်းဖောက်သည်ရရှိနိုင်ပုံများကိုရှိပါတယ်။ အပြင်သံမဏိခြစ်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသံချေးဟော့ Dip နှင့်အတူ coated welded သံမဏိကွက်ထဲကနေ, ဖောက်သည်များမှာလည်းရေနုတ်မြောင်းအခြားမျိုးစုံတို့အတွက်ဆန်ခါ, ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ပလတ်စတစ် PP တင်းကျပ်, စေးကပ်အထူး PP polypropylene ခြစ်ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆန်ခါဆန်ခါဖိုင်ဘာဖန် FRP ဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါ, ထိုကဲ့သို့သောဇယားကွက်လျတ်အစွန်းရေကူးကန်ကို ABS လျှံရေကူးခြစ်အဖြစ်ဒေသများရှိ applications များ၏သဘောသဘာဝပေါ် မူတည်. ။ ကျွမ်းကျင်မှုတိကျတဲ့ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါစံအထုပ်နှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီသံမဏိမဟုတ်သောစလစ်လှေကားထစ်သံလမ်းရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါအပေါငျးတို့သအမျိုးအစားများပါဝင်သည်။ ဆန်ခါနေသောလူသွားလမ်း ဦးထုပ်တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက် လယ်ပြင်၌စသည်တို့ကိုရေကူးကန်, ငါးရေကန်နေသောလူသွားလမ်း, ရေကူးမီးဖိုချောင်, ကော်ဖီဆိုင်, ကုန်တိုက်ကြီးတွေ, စက်ရုံတွေ, စျေးကွက်များအတွက်စံပြ။
ကင်ဆန်ခါ HDG ။ သံမဏိသွပ်ရည်စိမ်ရဲ့ချော plating သံမဏိ welded
အရွယ်အစား 40×100 စင်တီမီတာနှင့် 50×100 စင်တီမီတာ။
Ladder လှေခါးထစ်ကိုနင်းလှေခါးထစ်သံမဏိဇယားကွက်ဆန်ခါ HDG ။ သံမဏိ။ Non-စလစ်လှေကားထစ်နှာခေါင်းနှင့်အတူ ခြေရင်းချိန်ကိုက်ခြမ်းသိမ်းဆည်းရမိရှိပါတယ်။
ခြစ်ကုန်းနှီး Lock ကို Clamp Fastener စွဲစေ Clip HotDipGalvanized | ဆန်ခါကလစ်သော့ခတ်ပန်းကန်သံမဏိ။
ကျနော်တို့ Clip Lock ကိုစွဲစေ Fastener (trotters lock) ပီပြင်သော့ခတ်ကလစ်ချုပ်ကိုင်ပြားသံမဏိ / Fiber Glass ကိုကုန်းနှီးထုတ်လုပ်သည်သော့ခတ်ကလစ်သံမဏိ SUS316 နှင့်ဟော့ Dip အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသံမဏိအပါအဝင်ပစ္စည်းများ2အမျိုးအစားများနှင့်အတူဆန်ခါပန်းကန်လုံလုံခြုံခြုံ။
Hot Dip ၏ Specificaition ဆွဲသံမဏိသွပ်ရည်စိမ်ညီလာခံ (သွပ် HDG ။ ) ဆန်ခါသံမဏိခြစ်အစီအစဉ်ကိုအမိန့်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး။
ဆန်ခါသံမဏိရဲ့ Size ကို 1. 25x100cm .: 253/40/100 သည့် BB
HDG, ဆန်ခါသံမဏိရဲ့ 253/40, ထိုအရွယ်အစား 250x1000mm ။ , 40x100mm mesh ။ တစ်ဦးကအမြင့် 25mm .: ထူထပ်သောဘား 3mm ဖြစ်ပါတယ်။ // သံမဏိကွက်အရွယ်အစား 25×100 စင်တီမီတာအဖွင့် 4×10 စင်တီမီတာအထူသံမဏိ3။ မီလီမီတာ။ စင်တီမီတာမြင့်သော 2.5 ။
ဆန်ခါသံမဏိရဲ့ Size ကို 2. 30x100cm .: 253/40/100 သည့် BB
HDG, ဆန်ခါသံမဏိရဲ့ 253/40, ထိုအရွယ်အစား 300x1000mm ။ , 40x100mm mesh ။ တစ်ဦးကအမြင့် 25mm .: ထူထပ်သောဘား 3mm ဖြစ်ပါတယ်။ // သံမဏိကွက်အရွယ်အစား 30×100 စင်တီမီတာအဖွင့် 4×10 စင်တီမီတာအထူသံမဏိ3။ မီလီမီတာ။ စင်တီမီတာမြင့်သော 2.5 ။
ဆန်ခါသံမဏိရဲ့ Size ကို325x100cm .: 255/30/100 သည့် BB
HDG, ဆန်ခါသံမဏိရဲ့ 255/30, ထိုအရွယ်အစား 250x1000mm ။ , 30x100mm mesh ။ တစ်ဦးကအမြင့် 25mm .: ထူထပ်သောဘား 5mm ဖြစ်ပါတယ်။ // သံမဏိကွက်အရွယ်အစား 25×100 စင်တီမီတာအဖွင့် 3×10 စင်တီမီတာအထူသံမဏိ5။ မီလီမီတာ။ စင်တီမီတာမြင့်သော 2.5 ။
ဆန်ခါသံမဏိရဲ့ Size ကို430x100cm .: 255/30/100 သည့် BB
HDG, ဆန်ခါသံမဏိရဲ့ 255/30, ထိုအရွယ်အစား 300x1000mm ။ , 30x100mm mesh ။ တစ်ဦးကအမြင့် 25mm .: ထူထပ်သောဘား 5mm ဖြစ်ပါတယ်။ // သံမဏိကွက်အရွယ်အစား 30×100 စင်တီမီတာအဖွင့် 3×10 စင်တီမီတာအထူသံမဏိ5။ မီလီမီတာ။ စင်တီမီတာမြင့်သော 2.5 ။
စာရွက်သံမဏိဇယားကွက်စံချိန်စံညွှန်းများရဲ့ width အပါအဝင်သံမဏိခြစ် / applications များ၏အသုံးချပေါင်းစပ်။ ချက်ချင်းအလုပ်ဧရိယာမှ
စံအရွယ်အစားထက်ဆန်ခါသံမဏိအသုံးပြုချင်သူကိုဖောက်သည်များအတွက်နောက်ထပ်အခြားရွေးချယ်စရာ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ဖြန့်ဖြူး, ကျွန်တော်တစ်ဦးစံစာရွက်မှပူးတွဲပါသို့မဟုတ်ချက်ချင်းအသီးအသီးဧရိယာ၏သစ်ကိုအရွယ်အစားဝိသေသလက္ခဏာများကပ်လျက်နေရာချ၏အကျယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဦးလှေကားဆင်းသက်အကောင်အထည်ဖော်။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း။ စာရွက်များကနေအတူတကွပေါင်းစပ်နိုင်စံအရွယ်အစား ..2345 ခြုံငုံ width ကိုအတူတကွကွာခြား။ ကြီးမားတဲ့အောက်ပါသစ်ကိုရရှိရန် 1pcs ။ 25 / 30cm || 2pcs ။ 50/55 / 60cm || 3pcs ။ 75/80/85 / 90cm || 4pcs: 100/105/110/115/120 စင်တီမီတာ။ ။ ကောင်းကျိုးများသည့်ပန်းကန်၏စံသံကွက်အကျယ်၏လျှောက်လွှာများပါဝင်သည်။ ချက်ချင်းတာဝန်ရန်
1. ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်အချိန်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုဝယ်ချက်ချင်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအမိန့်ကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲကျော်ကို 5000 ကိုအပိုင်းပိုင်းနှင့်ပို့ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏စတော့ရှယ်ယာရှိပါတယ်။ ဘယ်ယေဘုယျအားဖြင့် 15-30 ရက်အတွင်းထက် welded နှင့်ချထားတဲ့သံချေးခံနိုင်ရည်နှစ်ဦးစလုံးကြာပါသည်။
2. အမိန့်မှစျေးနှုန်းချိုသာ အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်ငွေစု အရွယ်အစားနိုင်ရန်အတွက်ဖောက်သည်လိုသည်။ အသစ်သောပစ္စည်းများအဘို့တွက်ချက်စေခြင်းငှါ ဂဟေဆော်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း Add နှင့်မျက်နှာပြင်သံချေးထံသို့စေလွှတ် အရည်အသွေးမြင့်၏ 3. Delivery ။ အဆိုပါကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုစံချိန်စံညွှန်းများ ရလဒ်အဖြစ်ထုတ်ကုန် welding စက်ရုပ်အတူတူပင်အရွယ်အစားရှိပါတယ်။ အားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ်ဂဟေ annealing နှင့်အပေါ်ယံပိုင်းတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း
4. Customer များအပိုဆောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတွက်ချက်ရည်ညွှန်းခြင်းမရှိဘဲချက်ချင်းစံအရွယ်အစားသံလမ်းအမိန့်ပေးနိုင်သည်။ သူတို့ကပဲပေါင်းစပ်ပြီးနောက်သံချေးဖို့ခံနိုင်ရည်ဆေးသုတ်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူဂဟေထောက်ပြရန်ရှိသည်
(သံချေးမှုန်ရေမွှားဆေးထိုးခြင်းမဟုတ် ASTM A123, ASTM B6 ဟာအဆိုအရ 75 microns ထက်လျော့နည်းထူ Galvanizing ဟော့သို့ကျဆင်းလာ galvanizing နှင့်အတူ coated 5. ။ / Ta ကင်အထွေထွေလုပ်ပါ ဤသည်) သံမဏိပန်းကန် HDG လွယ်ကူရာသီဥတုဒါဏ်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဂဟေဆော်သံမဏိဘားခြစ်အမိန့် / မည်သို့ဆန်ခါသံမဏိထုတ်လုပ်ရန်။
width ကိုက x အလျားထက်ဆန်ခါ welded သံမဏိထုတ်လုပ်ရန်။ ဖောက်သည်ကလိုလားချလိုက်တယ်။
“ရဲရင့်” အကြောင်း3ပိုပြီးသိရန်လိုအပ်ပါသည်, “မြင့်သော”, “Hole”
1) အရှည်က x အကျယ် (ဇယားကွက်တစ်ခုစာရွက်၏အရွယ်အစား)
2) အထူ (သံမဏိပန်းကန်နှင့်ကြိတ်စက် 3mm သို့မဟုတ် 5mm)
3) မြင့်သော။ (25mm သို့မဟုတ် 50mm, သံမဏိကြမ်းပြင်-to-ပခုံးစွန်ကဲ့သို့)
4) တွင်း (ကို aperture ကင် 3x10cm သို့မဟုတ် 4x10cm ။ သို့မဟုတ် 5x10cm ။ ) ။
Shannon လေဆိပ်ကနေဆန်ခါသံမဏိဂဟေ ဂဟေသံမဏိဘားခြစ်နျ Standard အင်္ဂါရပ်များ။
လျှပ်စစ်သံမဏိအရည်ပျော်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းစေသည်ထားတဲ့အတွက် CO2 / MIG ဂဟေဆော်, ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထက်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအရည်ပျော်အစှမျးသတ်တိသည်အထိအော်တိုဂဟေနှင့်အတူ 1. ဂဟေစနစ်။ ဂဟေအဖြစ်ဆန်ခါသံမဏိချောမွေ့ဖြစ်ကြသည်။ နှင့်သံမဏိဂဟေဆိုင်ထက် Bond တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ
သံမဏိဘောင်ကင်ထားရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ 2. အရှိဆုံးသင့်လျော်သောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ minimalistic နှင့်ပေါ့ပါး။ ထို့အပြင်တက်သက်ရောက်နေစဉ်။ သေချာတစ်ခုလုံးကိုဖွဲ့စည်းပုံမှာတသမတ်တည်းဂဟေနှင့်လုပ်
ASTM A123, ASTM B6 ဟာ (rustproof မဟုတ်မှုန်ရေမွှားဆေးသုတ် / ဆေးသုတ်သည်နှင့်အညီအထူထက်နည်း 75 microns Galvanizing ဟော့သို့ကျဆင်းလာ galvanizing နှင့်အတူ coated3။ ကင်အထွေထွေလုပ်ပါ ဤသည်) သံမဏိပန်းကန် HDG လွယ်ကူရာသီဥတုဒါဏ်ကိုမှန်ကန်စေသည်။
ကတုတ်ကျင်းအဖုံးများအတွက်ဂဟေသံမဏိဘားခြစ် ( L-Angle မပါဘဲပွငျဆငျ) နှစ်ခုအတောင်ပံနှင့်အတူသံမဏိရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ။
ရေပြွန်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်မူလကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ပေမယ့်မှ L-ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အတူ upwardly သဟဇာတဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျထိပ်ပေါ်မှာနေရာချစကာတစ်ယိုစီးဆန်ခါရှိပါက။ မြေပြင်မညီမညာဖြစ်နေသောအောင် ထိုသို့ထိပ်ပေါ်မှာရွေ့လျားနေသည့်ဆန်ခါထံမှမလုံခြုံ။ ဒါကဆုံးမခြင်းစဉ်းစားသည်။ အဘယ်သူမျှမအစီအစဉ်များဖြစ်သင့်ပါလျှင် အတောင်နှစ်ဖက်လုံးကနေပြူးသံစာရွက်များ၏လုပ်နေကြသည်။ အလွန်အားကောင်းတဲ့အောင်နေသော်လည်း အရေပြားအနည်းငယ်ထိ မိ. လဲ ဒါဟာထွက်လာရန်မပြောင်းရွှေ့စေသည်ချလိုက်တယ်။ နှင့်ပိုပြီးလှပသောကြည့်ရှု: အမြင့်ဂဟေသံမဏိဘားခြစ်ဒီဇိုင်း Adjust
ပခုံး L. မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် အမြင့်ကင်ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်း။ သင်အမြဲမြင့်မားသောလူအပေါင်းတို့တန်းတူမြင့်မားတဲ့သံနှင့်တကွ, ဇယားကွက်အရွယ်အစားပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအထိပ်ကိုကျော်သို့ပွေးလေ၏ကားတစ်စီးမရှိဘဲဧရိယာအဖြစ်လိုအပ်သောထက်ပိုပြီးသုံးဖြုန်းဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်။ ကြေညာချက်ကယ်တင်နှင့်ဆန်ခါထားနိုင်ရန်အတွက်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုထားရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ရုံဇယားကွက်တစ်ဘက်မထိုက်မတန်ဖြစ်သင့်ဆက်ပြောသည်။ ထိုကဲ့သို့သော 25mm ၏အမြင့်တိုးပွားလာ။ 50mm ရန်အဖြစ်ဇယားကွက်၏အပိုအမြင့်၏ဥပမာများ။
သံမဏိရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ CHANCON ရွေးချယ်ရာတွင်များအတွက်အကြောင်းပြချက် ဂဟေသံမဏိရဲ့ Bar ကိုအားသာချက်များခြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးအမျိုးအစားများကိုဖန်ဆင်း 1. တစ်ဦးကရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ။ ကျနော်တို့ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါများအတွက်အထူးအထူးပြုတဲ့ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီသံလှေကားထစ်သံလမ်းရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါချော်နှင့်အတူဖွဲ့စည်းထားသည်ဖြစ်ကြသည်။ ဆန်ခါနေသောလူသွားလမ်း အဆိုပါယိုစီးမှုကိုဖုံးလွှမ်း
အရည်အသွေးကိုပစ္စည်း 2. ရွေးချယ်ရေး။ ခေတ်မီစက်ယန္တရားနှင့်အတူတစ်ဆန်ခါဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်။ သံမဏိ TIS ၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထိုအနှစ် 20 ထက်သံမဏိဆန်ခါ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှု၏အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။
Shannon လေဆိပ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ 3. သံမဏိစာရွက်များ။ လျှပ်စစ်သံမဏိအရည်ပျော်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းစေသည်ထားတဲ့အတွက် CO2 / MIG ဂဟေဆော်, အတူတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းသံမဏိပြားဘားဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူသံမဏိလိမ်လိမ်လှံတံကိုစလစ်ကွန်နက်ရှင်။ အလုပျသမားဂဟေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဂဟေအလုပ်စစ်ဆေးပါ။ အာမခံအရည်အသွေး, အားကြီးသောဖောက်သည်မတိုင်မီသက်သေပြရပါမည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့် စံအဖြစ်တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့အပေါက်အပေါက်။ အားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ်ပူးတွဲပေါင်းစပ်အဖြစ်အသား။ အထူထက်ပိုမို 75 microns အဘို့, သွပ်စံအဖြစ်ချထားတဲ့။ outlast ဖို့ခွန်အားများနှင့်ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
သံချေးတားဆီးဖို့ဘယ်လို သံမဏိသွပ်ရည်စိမ်မက်စ်ချထားတဲ့။သံမဏိသွပ်ရည်စိမ်မက်စ်ချထားတဲ့။ သို့မဟုတ်သွပ်ရည်စိမ်စတီးဆန်ခါ သံချေးကနေသံကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်အတူ။ ချေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး သံမဏိဆန်ခါ၏အသုံးဝင်သောဘဝကိုတိုးချဲ့ပါ။ ကုသမှုအများအပြားနည်းလမ်းများရှိပါသည် မင်းသား2နှင့်အတူပေါ်ပြူလာ Galvanizing plating ၌တည်ရှိ၏ 1.Hot သွပ်ရည်စိမ်သို့မဟုတ်ပူ-သို့ကျဆင်းလာသွပ်ရည်စိမ်နှစ်ပြီးသော။ သံမဏိသွန်းသောဇင့်အကြံပေးအဖွဲ့သို့နှစ်ပြီးသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုသမှု 65-300 မိုက်ခရွန်၏အထူအပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူသော pH အခြေအနေများအပြင်ဘက်တွင်ကြမ်းတမ်း enviroments မှာမြင့်မားတဲ့သက်တမ်းလိုအပ် application များအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ် 2.Electro ချထားတဲ့သွပ်ရည်စိမ်သို့မဟုတ်သွပ်ချထားတဲ့။ အဆိုပါလျှပ်သွပ်ရည်စိမ် အဆိုပါအပေါ်ယံပိုင်းမိုးလုံလေလုံအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့ကြသည်မဟုတ်သော Element ။ချထားတဲ့ 5-10 မိုက်ခရွန်၏အထူနှင့်အတူ သွပ်ရည်စိမ်ရဲ့ကြင်နာ plating မှရွေးချယ်ခြင်း။ လျှောက်လွှာနှင့်ကိုက်ညီရန်ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
ပါဝင်သည်စဉ်းစားရန်အမှုအရာရှိပါသည်: 1. ပတ်ဝန်းကျင် အိမ်တွင်းသို့မဟုတ်အိမ်ပြင် ပင်လယ်ပြင်သို့မဟုတ် သို့မဟုတ်အက်ဆစ်နှင့် alkaline များဖြစ်ကြောင်းစက်ရုံအလုပ်ရုံ၌တည်၏။ ကြမ်းတမ်း enviroments မှာ အကယ်. အကြမ်းခံသောကြောင့်ဟော့သွပ်ရည်စိမ်နှစ်ပြီးသောအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ တဖန်အသုံးဝင်သောဘဝကိုတိုးချဲ့ပါ။
2. ဒီဇိုင်း၏အသုံးအနှုန်းများ (Specification) က plating ဆိုအထူအဖြစ်သွပ်ရည်စိမ်ညီလာခံ plating ဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီဒီဇိုင်နာများ၏လိုအပ်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်မပါလျှင် plating ဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီဒီဇိုင်နာကိုမေးပါ။
3. အပိုငျးပိုငျး၏အရွယ်အစား ကစိုစွတ်ကြ၏နိုင်သွပ်ရည်စိမ်စက်ရုံရဲ့ကြီးမားတဲ့နမူနာ plating နှင့်အတူစစ်ဆေးပါ။ အသီးအသီးများတွင်လည်းကောင်းစက်ရုံကြောင့်, ဘိုကွဲပြားခြားနားသောမှေးမှိန်နေသည်ပာုသိရသည်။ များတွင်လည်းကောင်းရှေ့၌စေလွှတ်ရပါမည်။
ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများဂဟေဆော်ခြင်းဖြင့်စုဝေးရမည်ဖြစ်သည်လျှင်။ ညီလာခံမတိုင်မီများတွင်လည်းကောင်းမှပြီးစီးခဲ့ရပါမည်။ ဒီချိတ်ဆက်မှုကိုပြီးသားတစ်ဦးငယ်အနက်ရောင်ကိုမီးရှို့စေမည်။ နှင့်လုံးဝကြောင့်များ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျလုံးဝထပ်တူပြုခြင်းအစက်အပြောက်ဂဟေဆေးထိုးခြင်းငှါ၎င်း, အနက်ရောင်အမှတ်အသားများဖုံးကွယ်ဖို့အကြံပြုအရောင်များကိုစုဝေးများနှင့်ထည့်သွင်းမီသွပ်ရည်စိမ်ရဲ့အပိုင်းအစနှစ်ဖို့လိုတယ်လျှင်။ အဆိုပါအရောင်များကိုဆန့်ကျင်အနီးကပ်အဖြစ်ကောင်းစွာအပါအဝင်, ကောင်းစွာရောနှောနေခြင်း။
ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါသံမဏိဆန်ခါ, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်ပလပ်စတစ်ရဆေိုးလျတ်, # အဖုံး manholes ပြီးစီးသံအဖုံးများ, အပ်ချုပ်သူ, # FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, # ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE သွန်းလေ၏။ အဖုံး, #Swimming လျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်း, #Saddle Clip Clamp Lock ကို Fastener, # ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကို, #Tree စောင့်တပ်ဖွဲ့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆန်ခါ, # ဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများ, ကွန်ကရစ့်သတ်ထားခြင်းကိုသင်္ဂြိုဟ်အမှိုက်သရိုက်။ အဆိုပါ footpath, # ဆန်ခါ။ ဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည် ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း, # panel ကိုလိုက်ကာကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အလင်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်းအလင်းကိုအတားအဆီး slat, # ဖုံးနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကားချော်, # optional ကိုသော့ခတ်ကလစ်အဆိုပါဆန်ခါပန်းကန်လုံလုံခြုံခြုံ။
GFRP Composite သံမဏိ Gully Scupper သည့်ကားလမ်းခြစ်ကင်, Culvert ပြွန်တုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းမြောင်းပြီးပုံသွင်းလွယ်သံ Manhole Grid Catch အင်တုံမျက်နှာဖုံးများပစ်ချအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသတ္တုခြစ်, အကြီးစားတာဝန်ဆုပ်ကိုင် Struts Channel ကို, Access ကိုကြမ်းပြင်လူသွားစင်္ကြပလက်ဖောင်းပေါ်မှပေါက်ဖွားလာသူဖောက်ထား Air ကိုစီးဆင်းမှုလူမီနီယံကင်, Yard လွှတ်ဆင်းလမ်း Edging Expanded ။ အောက်ခံ, ကာဗွန် serrated ဘားသံမဏိ, ကုန်းနှီး Clip သော့ခတ်ညှပ် Fastener ကျောက်ဆူးသော့ခတ်သံမဏိ mounting panel ကိုကင်, Formworks Tie လှံတံ Wing Nut mounting ဘားဆန်ခါ, ဦးထုပ်ကျဇယားတွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်သံ, ပိုက်ထုပ်အမျှင်ဓာတ်ပေါင်းစပ်ဗဓေလသစ်သည်တင့်ကားယောက်ျားသည်အပေါက်ပိတ်အဖုံးကိုသွန်းလေ၏။ လက်-Holstein, manholes, ပိုက်, filter များ, မိလ္လာကန်, ရေ, မိလ္လာ manhole အဖုံး, Mat Raceway ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အဖုံးကို။ ပတ်ပတ်လည်ဦးထုပ် – စတုဂံ, ဘိလပ်မြေ, သံမဏိကွန်ကရစ်အားဖြည့်, ရေဆိုးစုဆောင်းခြင်းကုသမှုအတွက်အဖုံး, အဖုံးကိုချက်ချင်းဖြတ်ဖို့ left; ဆန်ခါ, ဂရိတ်အရသာ, သံမဏိကင်အဖုံးချက်ချင်း access ကို, ဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။ နှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုပျဉ်ပြား, အပေါက်တွေ, ရေ, သံမဏိ, စုတ်ပြဲနှင့်အတူလှေကားချောအဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်လမ်းကြောင်းလှံတံရွှေ့ပြောင်းခံရဦးရေနုတ်မြောင်းမြောင်း, matrix ကိုပျက်ကွက်, ဝါယာကြိုးကွက်, ဝါယာကြိုးကွက်, ဖုံးလွှမ်းဖောက်ထားတွင်းခေါက်။ , ဆန့်သံမဏိ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, texture trotters, ကြက်သား, မိုးရေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်, အနံ့ကြောင့်စလစ်, သံလမ်း, mini ကိုအသားတင်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုခင်း, အပြင်ပန်းအလှဆင် Koi ကန်, Landscaping, tile ကိုအရှိန်မြှ။ ကြမ်းပြင်စက်လစာတိုး, DIY တပ်ဆင်ခဃ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွှေ့, မီးခွက်, တစ်မြို့ရိုးပေါ်မှာဇယားကွက်မျက်နှာကြက်ကို T-bar ကို, မျက်နှာကျက် tile ကိုဒီလိုပါပဲအလင်း gauzy ကုလားကာမြို့ရိုးတပ်ဆင်ထားသည်။ ခြံစည်းရိုး panel ကအခန်းတစ်ခန်း Divide partition ကို။ utility အလှဆင်မျက်နှာကျက်မြတ်သောအပတ္တာ slat လိုက်ကာ Fiat အာရဇ်ပင် pergola ညေ, အကာအကွယ်ကွက်အဖုံးငှက်, မြွေ, ငှက်, ရှဉ့်နှင်ထုတ်ခြင်းနှောက်ခြောက်ခေါင်း, partition ကိုပြားစညျးဝေးပှဲ။ မွေ့လျော်, polycarbonate, ဗီနိုင်း, ရုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရုံး, ရေချိုးခန်း, လေအေးပေးစက်စနစ်, ဝါယာကြိုးတစ်ဦးကအခန်း Divide, High-grade ကိုပယ်ပြီး frosted ။ ထိုက်တန်အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, လေဝင်လေထွက်ကင်မျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဆိုင်းငံ့ ,. အမှတ်တရ Panel များနေကာ Splashboard / Weatherboard / Slat လိုက်ကာ / Trellis အရိပ်, အရောင်အသွေးစုံသောအထွေထွေ Sun က Screen ကို Partition ခွဲ, Anti-Bird ကိုထိန်းချုပ်ရေးခွငျထော, Mini ကိုအလှဆင်ခြစ်ကုလားကာ, ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်လျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်ခဲ့: အခန်းထဲမှာ, စူပါမားကတ်, ကျောင်း, စင်္ကြံတွေ့ဆုံ, ရုံးတည်ရာအရပ်။ , အိမ်သာ, ဆေးရုံ, re-အလှဆင်အကျင့်ကိုကျင့်, ကုလားကာနံရံမျက်နှာကျက်အုပ်ကြွပ်။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ခေါက်မျက်နှာစာ Ivy မြို့ရိုး, ပြား hinged, မျက်စိကန်းအလင်းကိုအတားအဆီးအလငျးကိုပိတ်ဆို့ခြင်းကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက် slat ။ Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA, တုတ်ကျင်းအင်တုံအသွားအလာလမ်းလမ်းမကြီးဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်းအခြမ်းရေနုတ်မြောင်း scupper ,. သံများအတွက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးခင်းမြောင်းအထူးကုပလပ်စတစ် primer ၏ဘေးထွက်တစ်လျှောက်တွင်အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံ scupper ရေနုတ်မြောင်းအသွားအလာခြစ်, PP PVC PE ကို ABS ရေကူးပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, အစားထိုးဖန်အတားအဆီးမျက်နှာဖုံးစျေးဆိုင်, အဆောက်အဦးများ, မြို့ရိုး, အပြင်ပန်းဝတ်, အခင်းစာရွက်များကျေးရွာအုပ်စု။ ခြေလျင်ခင်း, အပေါ်ကိုခါးပတ်ကနေသဟဇာတထုတ်ကုန်လမ်းခင်းများနှင့်ဒေသခံပန်းခြံများမြှင့်တင်ရန်။ ခရိုင်ကျန်းမာရေးလျှပ်စစ်လယ်စင်မြင့်ရှိုးများ, ပြိုင်ပွဲ, မြက်ပင်လုပ်ကွက်, ပန်းကန်, အလှဆင်မြို့ရိုးအပြား, အပြင်ပန်းလိုက်ကာ, မျက်နှာကျက်, မြို့ရိုး, eaves, gabled ရှေ့မုတ် Calais Partition ခွဲတံခါးများယုဒလူရဲ့အစောင်းများနှင့်ဖယောင်းစက္ကူစာရွက်အရွယ်အစား stairs ။ ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။ လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, ဖွဲ့စည်းမှု, အက်ဖ် RP, ခံနိုင်ရည်ချေး, သံချေး, အပူ, အလင်း, အက်ဆစ်, အယ်ကာလီ, ဓာတုပစ္စည်း, စွမ်းအင်ချွေတာရေးမရှိဖော non-အဆိပ်မဟုတ်သောမီးနှောင့်နှေး, ဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ်ဖိုက်ဘာမှန်အထူး။ အဘယ်သို့ Fibergrate, Strongwell, Webforge ,.
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးဂဟေသံမဏိဘားခြစ်ချေးခုခံအရေးကွီး၏ဘယ်မှာစိုစွတ်သော, ချောအခွအေနတစ်ခုစံပြထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပျော့သံမဏိခြစ်ပူအဆိုပါ galvanizing ရေချိုးအတွက်သွပ်ရည်စိမ်နှစ်ပြီးသောနေကြသည်။ galvanizing နှစ်ပြီးသောပူများအတွက်အသုံးပြုသောသွပ်၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 99,95% သန့်စင်ရလိမ့်မည်။ အဆိုပါသွပ်ရည်စိမ်အပေါ်ယံပိုင်း-3202 IS နှုန်းကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည် /-4759 IS /-2629 IS / IS – 2633 / ASTM -a -123 သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ညီမျှ-6745 IS ။ မျက်နှာပြင်၏အသွင်အပြင်ဆန်ခါလွင်ပြင်သို့မဟုတ် serrated သွပ်ရည်စိမ်စတီးဖြစ်ပါတယ်ကျယ်ပြန့်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် walkway, ပလက်ဖောင်း, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတားအဆီးတွေ, ရေနုတ်မြောင်းအဖုံးများနှင့်လေဝင်လေထွက်ခြစ်အဖြစ်ကျယ်ပြန့် applications များရှိပြီးအများစုမှာယေဘုယျစက်မှုဇုန်စက်ရုံများအဖြစ်စီးပွားဖြစ်အဆောက်အဦးများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ကနှိုင်းယှဉ်အစိုင်အခဲအခင်းကဲ့သို့တူညီသောဝန်ကိုထောက်ပံ့ကတည်းကဒါဟာအစထပ်ခိုးကုန်းပတ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ကိုပိုပြီး၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာပွင့်လင်းလေ, အလင်း, အပူ, ရေနှင့်အသံသည်များ၏စောင်ရေကောင်းလာတာပါ ,. Materiales: သံမဏိလိုင်းကာဗွန် အဆိုပါ Surface ကကုသမှု: ပူ Easy-နှစ်ပြီးသော, အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး, ထိုရှိနိုင်အလင်း Duty အကြီးစား Duty ခုနှစ်တွင်, အရှိနိုင်ခုနှစ်, welded, သော့ခတ်-စာနယ်ဇင်းထုတ်လုပ်မှု, သို့မဟုတ် Swaged Lock ကို flush Add: ဆောက်လုပ်ရေး mount သံမဏိခြစ်သည့်အင်္ဂါရပ်များ :. * စတော့ရှယ်ယာအရွယ်အစားသို့မဟုတ်အတွက်ဝယ်ယူနိုင် စီမံကိန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်လုပ်ကြံထုံးစံ။ စွမ်းရည်ဆောင်သော * Excellent ကဝန် * ၏လေဝင်လေထွက် လေ, အလင်း, အသံ * အရည်များနှင့်အပျက်အစီးများ * Long ကဝန်ဆောင်မှုဘဝစုဆောင်းမနေပါနဲ့ * ပွင့်လင်းဒေသများ၏ Wide အကွာအဝေး * အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသံမဏိဆန်ခါတစ်ခုပွိုမျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစချောများအတွက်အမြဲတမ်းအစားထိုးဖြစ်ပါတယ် serrated နှင့်လွင်ပြင်ဆန်ခါ။ * ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များအများအပြားရရှိနိုင်မယ့် လိုအပ်ချက်နှင့် applications များအမျိုးမျိုးဖြည့်ဆည်းဖို့နဲ့ Space option ။ * Anti-ခိုးယူဒီဇိုင်း: မျက်နှာဖုံး နှင့်ဘောင်ပတ္တာပူဇျောသက်ကာလုံခြုံရေး, ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းအဆင်ပြေစေရန်နှင့်အတူပူးတွဲဖြစ်ပါတယ်။ * အမြင့်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ: ခွန်အားနှင့် ခိုင်မာခြင်းသွန်းသံထက်ပိုများသည်။ ဒါဟာဆိပ်ကမ်း, လေဆိပ်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် အခြားကြီးမားသော-span နှင့်မိုးသည်းထန်စွာတင်ခွအေနအေ။
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသံမဏိခြစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း Applications ကို: # ဆန့်ကျင်စလစ်တံတားကုန်းပတ် # တံတားနေသောလူသွားလမ်း # သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းစနစ်များ # မီးသတ်ထရပ်ကားပလက်ဖောင်း # Mass အကူးအပြောင်းပလက်ဖောင်း # အဏ္ဏဝါနှင့်သင်္ဘော # ထပ်ခိုး # Non-စလစ် # Non-နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်သောမြေတွင်း # Vault ဖုံးလွှမ်း # အထွေထွေစက်မှုလုပ်ငန်း # Truck ကားပလက်ဖောင်း # စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံကိုခံနိုင်ရည်ပလက်ဖောင်းဖုံးလွှမ်း walkways decks ။ စိုစွတ်ကုန်းပတ်မှရေဆိုးကုသမှုစက်ရုံ # # # ပုနင်းဆန်ခါ, လှေခါးထစ်
, သံမဏိရဲ့ Bar ကို HotDipGalvanized ဖြစ်ပါတယ်ခြစ် welded Fastener စွဲစေအပေါ်ကုန်းနှီး Clamp ပြုပြင်မွမ်းမံစားပွဲတင်ကလစ်သော့ခတ်သော့ကိုဆန်ခါ | ဆန်ခါကလစ်သော့ခတ်ပန်းကန်သံမဏိ။နှစ်ခုနည်းလမ်းများတွင်တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်: * ဂဟေဆော်ခြင်း / တည်ဆောက်မှုကိုဖယ်ရှားအခမဲ့အမြဲတမ်းအသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုတယ်။ ဘားကကျေးဇူးတင်တစ်ခုချင်းစီကိုထောင့်မှာ Support ဘောင် (ထောင့်သံမဏိ, ငါသံမဏိသို့မဟုတ်အခြားအခြေခံအဆောက်အဦးသံမဏိ) မှ welded လိမ့်မည်။ လွှာဂဟေဆော်သည့်အခါ 20mm ထက်ဂဟေအရှည်ကိုပိုပြီးနှင့် 3mm ထက်အမြင့်ကိုပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။ installation ဗီဒီယိုအပိုင်းအစများဟာဇင့်အပေါ်ယံပိုင်းဖျက်ဆီးဖယ်ရှားပစ်ရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ တစ်ခုချင်းစီကို panel ကိုကအနည်းဆုံးလေး installation ကိုကလစ်များလိုအပ်သည်။ ပိုကြီးတဲ့ပြားများအတွက်ပိုကောင်းအချို့ပိုပြီးကလစ်ပ်လျော်ထောက်ခံမှုဘောင်မှပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေပါသည်။
တစ်ဦးကဆန်ခါမဆိုမှန်မှန်လှပတဲ့စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တူညီ, အပြိုင်, elongated ဒြပ်စင်။ ခြစ်များသောအားဖြင့်တစ်တစ်ခုတည်း set ကိုထားရှိရေး elongated ဒြပ်စင်ပေမယ့်နှစ်စုံ perpendicular တဲ့အခါဒုတိယ set ကိုများသောအားဖြင့် perpendicular ပထမဦးဆုံးဖို့, ဒီကိုလည်းဇယားကွက်သို့မဟုတ်တစ်ကွက်အဖြစ်လူသိများသည်သောအမှု၌နှစ်စုံ၏ရှိရေးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကတစ်ဦးမြောင်းဖုံးအုပ်ဆန်ခါတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည် တစ်ဦးပိုမိုပေါ့ပါးသံဘောင်အားဖြင့် (ထိုအရက်ဆိုင်အပြိုင်ပုံမှန် space ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်) အတူတူကျင်းပသံဘား၏စုဆောင်းမှုကို (တူညီ, elongated ဒြပ်စင်) ။ ရေနုတ်မြောင်းနှင့်လေကြောင်းအပေါက်တွေကျော်ခြစ်အသုံးပြုကြသည် (ထိုကဲ့သို့သောအရွက်ကဲ့သို့) ကြီးမားသောအမှုန်များ၏လှုပ်ရှားမှုကိုပိတ်ဆို့ရန်နှင့် (ထိုကဲ့သို့သောရေသို့မဟုတ်လေထုကဲ့သို့) သေးငယ်တဲ့အမှုန်များ၏လှုပ်ရှားမှုကိုခွင့်ပြုပါရန်, filter များကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆန်ခါ anti-စလစ်သံမဏိဆန်ခါဘားအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သံမဏိ bar ကိုဆန်ခါနည်းလမ်းများအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်နေသည်။ welded bar ကိုဆန်ခါလျှပ်စစ်ဖျူးအရက်ဆိုင်ကူး welded ဝန်အရက်ဆိုင်ပါဝင်ပါသည်။ ဆန်ခါဖိအား-သော့ခတ်ဘား, ဒါမှမဟုတ် swaged ဆန်ခါသံမဏိချောင်းတွေမှတဆင့်အတင်းအဓမ္မများနှင့်ဝန်အရက်ဆိုင်ထဲမှာသော့ခတ်ထားရာဖြစ်ပါသည်။ ဝန်အရက်ဆိုင်လက်ဝါးကပ်တိုင်အရက်ဆိုင်မှ riveted ရှိရာ Riveted bar ကိုဆန်ခါဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သောအသီးအသီးအမျိုးအစားအဘို့ကုန်သွယ်အမည်များကျယ်ပြန့်အမျိုးပေါင်းရှိပါတယ်။ ဖောက်ထားစာရွက်သတ္တုအမျိုးအစားများ: စိန်-shaped serrated ဖောက်ထားစာရွက်သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်မှုအမည်များဥပမာဆုပ်ကိုင် Struts, စိန်ဆုပ်ကိုင်, Ry, စိန်, ဆုပ်ကိုင် Span, အလှဆင် Span, ဆုပ်ကိုင် Track ဖြစ်ကြသည်။ round အပေါက်ဖောက်ထားစာရွက်သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်မှုအမည်များဥပမာစွမ်းဆောင်ရည်-o-ချုပ်ကိုင်ထား, အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး-ချုပ်ကိုင်ထား, ရှုရမြို့ဆုပ်ကိုင်, Ry-ဆုပ်ကိုင်, ပွင့်လင်းဆုပ်ကိုင်နှင့်ခြစ် Lock ကိုဖြစ်ကြသည်။ ချိုဖောက်ထားစာရွက်သတ္တုထမြောက်တော်မူ။ ကုန်သွယ်မှုအမည်များဥပမာ Traction ကိုနင်းနယ်များမှာ ,. အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကိုနင်းနယ်ရှုရမြို့အဆင့်, Ry-ကိုနင်းနယ်နှင့်ကိုနင်းဆုပ်ကိုင်။ ပလီကေးရှင်းများအများစုထိုသို့သင့်လျော်အောင်ဆန်ခါလွင်ပြင်မျက်နှာပြင်၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Self-သန့်ရှင်းရေးသွင်ပြင်လက္ခဏာများ။ အဆိုပါဆန်ခါ၏ထိပ်မျက်နှာပြင်စိုစွတ်သောသို့မဟုတ်ချောဖြစ်လာစေနိုင်ကြောင်းအရည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ခုနှစ်, optional ကို serrated မျက်နှာပြင်၏သတ်မှတ်ချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ serrated ဆန်ခါသတ်မှတ်ထားသောသောအခါ, ဝံဘားနက်ရှိုင်း Non-serrated ခြစ်နှင့်ညီမျှတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိများကိုဝန်ကျောက်ပြားပေါ်မှာပြထားတဲ့အရွယ်အစားထက် 1/4 လက်မ သာ. ကြီးဖြစ်ရပါမည်။ အဆိုပါ optional ကို serrated မျက်နှာပြင်၏သတ်မှတ်ချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ serrated ဆန်ခါသတ်မှတ်ထားသောသောအခါ, ဝံဘားနက်ရှိုင်း Non-serrated ခြစ်နှင့်ညီမျှတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိများကိုဝန်ကျောက်ပြားပေါ်မှာပြထားတဲ့အရွယ်အစားထက် 1/4 လက်မ သာ. ကြီးဖြစ်ရပါမည်။ အဆိုပါ optional ကို serrated မျက်နှာပြင်၏သတ်မှတ်ချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ serrated ဆန်ခါသတ်မှတ်ထားသောသောအခါ, ဝံဘားနက်ရှိုင်း Non-serrated ခြစ်နှင့်ညီမျှတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိများကိုဝန်ကျောက်ပြားပေါ်မှာပြထားတဲ့အရွယ်အစားထက် 1/4 လက်မ သာ. ကြီးဖြစ်ရပါမည်။
သတ္တုဘားခြစ်စက်မှုအခင်းစျေးကွက်၏လိုမျိုးတော့သည်နှင့်တစ်ဦးခြွင်းချက်အစှမျးသတ်တိ-to-အလေးချိန်အချိုးနှင့်အတူ decades.Strong နှင့်တာရှည်ခံအဘို့အစက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်, သတ္တုဘားဆန်ခါကိုအလွယ်တကူနီးပါးမှလုပ်ကြံနိုင်ပါသည်ပွင့်လင်းဧရိယာ၏မည်သည့် configuration.The မြင့်မားသောရာခိုင်နှုန်းကိုမှန်ကန်စေသည်။ လက်တွေ့ကျကျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့နှင့်ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုဆန်ခါဘားအပြည့်အဝပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်ကြသည်။
ဆန်ခါဘားအများအပြား application များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဆန်ခါဘားတုတ်ကျင်းများနှင့်လှေကားထစ်နင်းရာမှကုန်းပတ်နှင့်သံမဏိအခင်းအထိစီမံကိန်းများအတွက်အားကြီးသောရှေးခယျြမှုဖြစ်ပါတယ်။ သတ္တုခြစ်, အခင်းအဆင့်ဆင့်အကြားသွားအလင်း, အရည်, လေ, အပူနှင့်အသံသည်လိုအပ်သည်ကြောင်းအခင်းထဲမှာဘားဆန်ခါအဖုံးများဖွင့်လှစ်ဒေသများအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်းအများအပြားစက်မှုကုမ္ပဏီများသည်, ဤအကြောင်းပြချက်နှင့်ပိုပြီးအဘို့အဆန်ခါကြမ်းပြင်အဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်ဆန်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ bar ကိုတင်ထားရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ serrated ကာဗွန်သံမဏိ bar ကိုဆန်ခါလမ်းလျှောက်သည့်အခါအပိုချုပ်ကိုင်ထားပေးပါသည်, ငါတို့ Titeweld? ဘီးတပ်ကုလားထိုင်, လက်ထရပ်ကား, လှည်းသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုမှုအတွက်အခါ bar ကိုဆန်ခါအများဆုံး “လိပ်-a-bility” ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သမျှစေသည်။ တိုက်ရိုက် Metals, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမီနီယံဆန်ခါနှင့်ငါတို့ bar ကိုဆန်ခါထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလိုင်းတက်အောင်ဆန်ခါသံမဏိအမျိုးမျိုးမှာ။ ခြားနားချက်လူမီနီယံနှင့်သံမဏိဆန်ခါကဘာလဲ? အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်ဆန်ခါသတ္တုမှာကြည့်လိုက်ပါ!
ဆန်ခါဘား Chassis ကိုလူမီနီယမ်ဖြစ်ပါတယ် ပေါ့ပါး, တိုက်စားမှုများကိုခုခံပစ္စည်းလိုချင်သောသည်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးကကောင်းပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော flush ထိပ်တန်းအဖြစ်အများအပြားရွေးချယ်စရာကနေရှေးခယျြပါ , စတုဂံဘား, ပျဉ်, & I-bar ကို။ လူမီနီယမ်ဆန်ခါယင်း swage သော့ခတ်အတွက်ရရှိနိုင် , ဖိအားသော့ခတ် (ချိုးငှက်အမြီး) နှင့် riveted ဒီဇိုင်း။
ဆန်ခါသံမဏိရဲ့ Bar ကို၎င်းကာဗွန်ဖြစ်ပါတယ် သင့်အစည်းအဝေးတွင်စီမံကိန်းအားတစ်ဦးခိုင်ခံ့သောပစ္စည်းလိုအပ်သည်ပြီးတော့သင်ဟာတစ်ဖော်ပြချေးပတ်ဝန်းကျင်ရန်အဆိုပါဆန်ခါဖော်ထုတ်သွားကြသည်မဟုတ်သည့်အခါတစ်ဦးက Nice ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ လွင်ပြင်သို့မဟုတ် serrated မျက်နှာပြင်ကနေရှေးခယျြပါ, အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး , စံအနက်ရောင်, ရှင်းလင်းသောသံမဏိသို့မဟုတ်ခြယ်သခြင်းနှင့်အလင်းသို့မဟုတ်မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ဆန်ခါ။
ဆန်ခါသံမဏိရဲ့ Bar ကိုပု stainless ဖြစ်ပါတယ် Chassis ကိုလူမီနီယမ်သန်းတစ်ဦးအားခုနှစ်တွင်သာလွန်တိုက်စားမှုများကိုခုခံပစ္စည်းပစ္စည်းများ၏တစ်ဦးက & oxide ပေး။
သံမဏိဘားခြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏စူပါကျဉ်းမြောင်းသောဂဟေဆန်ခါစံပြဖြစ် သငျသညျအမြင့်ဆုံးလိုအပ်သည့်အခါသူတို့အကအလွန်တင်းကျပ်စွာအကွာလိုအပ်ချက်များကို “လိပ်-a-bility ။ ” ။
နင်းဘားခြစ်ဖြစ်ပါသည်, လှေခါးထစ် တစ်ဦးကပုံမှန်အားဖြင့်ခုနှစ်တွင်ကြသူများဖြစ်ပါတယ်, ဆောက်လုပ်ရေး welded ပြီးတော့တစ်ဦးကနှာခေါင်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အဆိုပါနင်း၏ဦးဆောင် EDGE ရန် Is welded ။
ဆန်ခါဘားဗိသုကာကန့်သတ်အစီရင်ခံနေသည် စက်မှု Applications ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးတော့ဗိသုကာကန့်သတ်အစီရင်ခံသည်။ ဒါဟာခိုင်မာတဲ့အထိစီမံကိန်းများအတွက်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ် sunshades ကနေခြံစည်းရိုး, အဆောက်အဦမျက်နှာစာ, ဖို့အတွက် walkway, တန်ဆာဆင်ကင်သို့မဟုတ်မည်သည့်အမြင်အာရုံဆွဲဆောင်မှုစီမံကိန်းကို။
devices အဆိုပါဘားကကျေးဇူးတင် anchoring ပူးတွဲအတွက်မရှိမဖြစ် က၎င်း၏ထောက်ခံမှုဆိုင်တွေမှာရန်။ ကျနော်တို့ကုန်းနှီးကလစ်များ, ကျောက်ဆူးလုပ်ကွက်, ပူဇော် ပျဉ်ကလစ်များ, countersunk မြေများ, ဆန်ခါညှပ်, Z ကိုကလစ်များနှင့်ပျဉ် lugs ။ အတော်များများကလူမီနီယမ်, သံမဏိအတွင်းရရှိနိုင်ပါသည် နှင့်သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ။
ဘားကကျေးဇူးတင်ထုတ်လုပ်မှုအမျိုးအစားသံမဏိရဲ့ ပု ASTM လိုင်းကာဗွန်အပျော့စားသံမဏိ မှစ. ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပြီးတော့သုံးထူးခြားသောထုတ်ကုန်များတွင်ရရှိနိုင်ဖြစ်ပါသည်: အမျိုးအစားက “W” ဘားခြစ်, welded, အမျိုးအစားခြစ်သော့ခတ် “ဟု၎င်းကို” Dovetail ဖိအား, အ Swage ခြစ်သော့ခတ် “ဟုအဆိုပါ SL” ရိုက်ထည့်ပါ။ အားလုံးသုံးထုတ်ကုန် bearing ဘားနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည် စင်တာအပေါ်ဖြစ်စေမှာစင်တာနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်အရက်ဆိုင်ပေါ်အထိကွာဟချက်တွေတူပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်ကုန်စံလွင်ပြင်မျက်နှာပြင်ရှိပြီးသို့မဟုတ် optional ကို serrated သို့မဟုတ် Algrip မျက်နှာပြင်များနှင့်အတူသတ်မှတ်ထားသောနိုင်ပါသည်။ Finish ကိုရှေးခယျြစရာရှင်းလင်းသောသံမဏိ, ပန်းချီ, ပါဝင်သည် အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးပူသို့ကျဆင်းလာခြင်းသို့မဟုတ်အထူးကုတ်အင်္ကျီ။ ဝန်စားပွဲဆန်ခါသံမဏိ bar ကိုအသေးစိတ်များကို ထိုထုတ်ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောသတ်မှတ်ချက်သတင်းအချက်အလက်။
“W” ဂဟေဆော်သံမဏိခြစ်ရိုက်ထည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အများဆုံးချွေသံမဏိဆန်ခါထုတ်ကုန်အမျိုးအစား “W” သံမဏိခြစ် rectangular bearing အရက်ဆိုင်များနှင့်ရေးဆွဲလက်ဝါးကပ်တိုင်အရက်ဆိုင် welding Forge ကထုတ်လုပ်နေကြ welded ။ ဤသည်ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ဦးအပြုသဘော fused ကွန်နက်ရှင်ကိုထောက်ပံ့ပေး အရှိဆုံးတောင်းဆိုမှုများအခြေအနေများအောက်တွင်ဝန်ဆောင်မှု၏နှစ်ပေါင်းပေး။ အမျိုးအစား “W” သံမဏိဆန်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပါတယ် လူကြိုက်အများဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့်အားလုံးနီးပါးစက်မှုဇုန်အခင်း application များအတွက်အကြံပြုသည်။ နီးပါး 80% ပွင့်လင်းသောဧရိယာနှင့်အတူအမျိုးအစား “W” ကိုလွယ်ကူပါတယ်ဖုန်၏ကျမ်းပိုဒ်, အပျက်အစီးများ, ဆီးနှင်းများနှင့်အရည်အဘို့ခွင့်ပြုနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Self-သန့်ရှင်းရေးဖြစ်ပါတယ်။ “W” ခြစ်ရိုက်ပါရရှိနိုင်ကြသည် , အနီးကပ်ကွက်လေ့အများပြည်သူဒေသများအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ ADA ကိုက်ညီ space ။ ADA များအတွက်အမျိုးအစား “W” သတ်မှတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာ applications များ, ထူ bearing အရက်ဆိုင်သတ်မှတ်ထားသောရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါအမျိုးအစား “ဟု၎င်းကို” နက်ရှိုင်းသောသံမဏိ, ခြစ်အဆိုပါ Rectangular လက်ဝါးကပ်တိုင်ရှိသည်နှင့်ဘားဟာလက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်, Pre-ဘားဘားပြီးတော့လက်ဝါးကပ်တိုင်ထဲသို့တစ်ဘို့ bearing ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်နေ “ဥ-သေတ္တာ” ပြင်းထန်သောဖိအား Hydraulic လက်အောက်တွင် Configuration ကိုပုံပျက်သောထိုအဆိုပါလက်ဝါးကပ်တိုင်ဘား။ အမျိုးအစား “၎င်းကိုအပေါ်နက်ရှိုင်းသောလက်ဝါးကပ်တိုင်အရက်ဆိုင် ” ခြစ်အတွက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းလက်ဝါးကပ်တိုင် bar ကိုတစ်ဦးကွဲပြားဗိသုကာဝဲအဖြစ်အမှုဆောင်နှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောနေရောင်အရိပ်နှင့် infill ပြားအဖြစ်ဗိသုကာ applications များအဘို့ထိုသူတို့လူကြိုက်များစေ။
Swaged လမ်းဆုံခြစ်အမျိုးအစား “SL” Swage သော့ခတ်။ သံမဏိခြစ်အမျိုးအစား “SL” သံမဏိခြစ် ဝံအရက်ဆိုင်ထဲမှာ Pre-လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်တွင်းသို့ဆွန်းပြွန်လက်ဝါးကပ်တိုင်အရက်ဆိုင်ထည့်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်အရက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်း swaged နေကြသည် အပြုသဘောစက်မှုကွန်နက်ရှင်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ဘားထိပ်ကိုအောက်တွင် recessed နေကြပါတယ် တဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့ဆွဲဆောင်မှုဗိသုကာအသွင်အပြင်ပေးဆောင်သောဘား၏မျက်နှာပြင်။ Swage သော့ခတ်များအတွက်အထူးသဖြင့်ထိရောက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည် အနီးကပ်ကွက်ခြစ်များ၏ထုတ်လုပ်မှု။ type “SL” ထူ bearing အရက်ဆိုင်ကိုထောက်ပံ့ပေး ဝံအရက်ဆိုင်များအကြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်လှစ်။ ဤသည်ကျဉ်းမြောင်းသောအဖွင့်ကိုမကြာခဏအများပြည်သူအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်သည်ကို ရေနုတ်မြောင်း၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်မြင့်မားသောဒေါက်ဖိနပ်၏ရှေ့မှောက်တွင်ဆုံရှိရာဒေသများ။
Expanded သတ္တုခြစ်ခြင်းနှင့် mesh:Expanded သတ္တုဆန်ခါသို့မဟုတ်တိုးချဲ့သတ္တုကွက်ဖြစ်ပါတယ် ခွန်အားကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် non-နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်မျက်နှာပြင်အာမခံဖို့အများဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်စီးပွားရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Expanded သတ္တုဆန်ခါပေါ်အသုံးပြုမှုအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ် ကြောင့်အလွယ်တကူမမှန်ပုံစံမျိုးစုံသို့ဖြတ်နေသည်နှင့်ဂဟေသို့မဟုတ် Bolt အားဖြင့်လျင်မြန်စွာ installed နိုင်ပါတယ်အဖြစ်, စက်ရုံပြေးလမ်းအလုပ်လုပ်ပလက်ဖောင်းများနှင့်ရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာ။ ထို့အပြင်ဝါယာကြိုးအထည်သို့မဟုတ်ဟုခေါ်တွင်ဝါယာကြိုးကွက်, ဝါယာကြိုးထည်, ထိထိရောကျရောကမ္ဘာအနှံ့မရေမတွက်နိုင်အောင်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုနိုင်မယ့်စွယ်စုံသတ္တုထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှုဇုန်ကနေစီးပွားရေးအရအသုံးပြုမှုရန်, ဝါယာကြိုးကွက် နေ့တိုင်းအသုံးပြုတဲ့ဘုံသတ္တုထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အလူမီနီကွက်, ကြေးနီကွက်နှင့်ကြေးဝါကွက် လည်းကြေးဝါ, ပျော့သံမဏိ, Pre-သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိနှင့်သံမဏိပါဝင်သည်ကြောင့်ဝါယာကြိုးကွက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများစာရင်းကိုအကြားရှိပါတယ်။
အကြီးစား Duty သံမဏိခြစ်၏ specification :.
ဘား 1 ပုံသဏ္ဍာန်များအတွက်စေ့စေ့စပ်စပ်အမျိုးအစား Serrated ထိုအခါငါ-Shape Shape အမျိုးအစားသည်ရိုးရိုး (ချန်လှပ်သံမဏိဆန်ခါအဆိုပါသင်္ကေတတစ်ခုမှာတော့ Be နိုင်ပါစေ) ရိုက်ထည့်ပါ .:
2. အစေး 30mm & 40mmare အကြံပြုဘယ်ဟာ၏တစ်ဘား, စေ့စေ့စပ်စပ်မှာဖို့ဖွဲ့နိုင်ပါသည်။
3. လက်ဝါးကပ်တိုင်ဘားကွင်း 100mm နိုင်ပါတယ်နေကြသည် အကြံပြုခဲ့သည်။
4. က Surface ကုသမှု: Hot-သို့ကျဆင်းလာ galvanizing , ဆေးသုတ်သို့မဟုတ်အခြား Anti-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးအင်္ကျီကိုပူ-သို့ကျဆင်းလာသွပ်ရည်စိမ်ယေဘုယျအားအကြံပြုထားတဲ့၏, ရရှိနိုင်ပါသည်။
5. ပစ္စည်း: ASTM A36 / SS235JR / SS400 / Q235B ။
6. စာနာထောက်ထားရေးအရှည်၏ခွင့်ပြုသွေဖည်ဖြစ်ပါတယ် အကျယ်၏ခွင့်ပြုသွေဖည် +/-5မီလီမီတာနေစဉ် +0/ -5mm ။ bearing ဘား non-perpendicularity ဖြစ်ပါတယ် bar ကိုဆောင်သော၏အကျယ်၏ထက်ပိုမ 10% ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင် bar ကိုမျက်နှာပြင် bar ကိုဆောင်သောကျော်ဖြတ်မဖြစ်သင့် , မျက်နှာပြင် 1mm စတင် & လက်ဝါးကပ်တိုင်ဘား၏အဆုံးဆန်ခါ 2mm ၏နှစ်ဖက်၏အဆုံးမျက်နှာပြင်များစံချိန်တင်သင့်ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဗိသုကာသတ္တုထုတ်ကုန်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် စက်မှုဇုန်ကနေဗိသုကာအသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးသော applications များ။ ဝါယာကြိုးကွက်၌အကြှနျုပျတို့၏ဗိသုကာပုံစံများကိုမှရွေး ဖောက်ထား, တိုးချဲ့သို့မဟုတ်ဆန်ခါ။
ဝါယာကြိုးကွက် ဝါယာကြိုးထုတ်ကုန်စွယ်စုံစီးပွားရေးနှင့်ပေါ့ပါးနေကြသည် ။ သူတို့ကပင်အတွက်အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေအောင်နိုင်ပါသည် ရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်စက်မှုဇုန်သို့မဟုတ်ဗိသုကာစီမံကိန်းကို။ ပစ္စည်းများပါဝင်သည်: ကာဗွန်သံမဏိ, သံမဏိ , သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိနှင့်ထုံးစံသတ္တုစပ်။ ဝါယာကြိုးကွက်ဖို့အများကြီးဗိသုကာပုံစံများကိုလာ သင့်ရဲ့တိကျတဲ့စီမံကိန်းကိုကိုက်ညီ။ ရောထွေးလွိုင်းပုံစံများကနေရှေးခယျြပါ, spiral- patterned ကွက်, မြင့်မားသောပွင့်လင်းသောဧရိယာကွက်များနှင့်ထုံးစံကွက်ပုံစံများမှဒီလိုပါပဲ။ ဝါယာကြိုးကွက်စတုရန်း, ပြားချပ်ချပ်များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် & ဘက်စုံသုံး cable ကိုကွက်ထဲမှာ – နှင့်ပတ်ပတ်လည်ဝါယာကြိုးများ။
သတ္တုဖောက်ထား သတ္တုတစ်ဦး slot နှင့်အလှဆင်ဖောက်ထားအလွန့်အလွန်ဘက်စုံပြီးတော့ Lightweight Is ထိုအလှည့်လည် Shape လာ, ရင်ပြင် perforated ။ တချို့ကဗိသုကာ applications များနေရောင်ကာကွယ်ဆေး, မျက်နှာကျက်ပြားပါဝင်သည် , အပြင်ပန်းဝတ်ဒါမှမဟုတ်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ကြည့်လိုအပ်မည်သည့်လျှောက်လွှာ။
Expanded သတ္တု သည့်သတ္တုအဘို့အ Expanded အလွန့်အလွန်စက်မှုစီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်။ သူကတောင်များတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အဆင်ပြေအောင်နိုင်ပါသည် ရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်ဗိသုကာသတ္တုစီမံကိန်းကို။ သငျသညျစတိုင်များ၏ကျယ်ပြန့်အရေအတွက်ကတွေ့လိမ့်မည် ထံမှရွေးချယ်ဖို့နှင့်ပစ္စည်းများ။ ပြစ်သို့မဟုတ် Standard အတွက်ရရှိနိုင်။
ဘားဆန်ခါ ဘားခြစ်စက်မှု Applications ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးတော့ဗိသုကာန့်သတ်ချက်ကဖော်ပြခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခိုင်မာတဲ့အထိစီမံကိန်းများအတွက်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ် sunshades ကနေခြံစည်းရိုး, အဆောက်အဦမျက်နှာစာ, ဖို့အတွက် walkway, တန်ဆာဆင်ကင်သို့မဟုတ်မည်သည့်အမြင်အာရုံဆွဲဆောင်မှုစီမံကိန်းကို။
လျှောက်လွှာဆန်ခါနောက်ထပ်ဗိသုကာဘားစက်မှုဇုန်အပင်အတွင်းပိုင်းအပေါင်းတို့နှင့်တကွကျွန်တော်တို့ဝန်းကျင်အပြင်ရှုခင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောသံမဏိခြစ်, ပါဝင်သည်။ ဒါ့အပြင်သတ္တုခြစ်အဖြစ်လူသိများ, သံမဏိခြစ်လေ, အလင်း, အပူနှင့်အရည်၏ကျမ်းပိုဒ်ခွင့်ထို့ကြောင့်အမျိုးမျိုးသော setting တွင်မလိုချင်တဲ့ဒြပ်စင်များနှင့်အပျက်အစီးများကိုထုတ်ပြအတွက်အသုံးဝင်ပါသည်။ ခြံဝင်းသို့ဝင်ရေနုတ်မြောင်း, stormwater ရေနုတ်မြောင်း, ကတုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းနှင့်ကြမ်းပြင်ရေနုတ်မြောင်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်သံမဏိခြစ်နှင့်အတူမထိုက်မတန်ဖြစ်ကြသည်။ သံမဏိခြစ်ဓာတုစက်ရုံများ, အစားအစာအပြောင်းအလဲနဲ့အဆောက်အဦများနှင့်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့သန့်စင်အတွက်စက်မှုဇုန်ကုန်းပတ်နှင့်အခင်းအဘို့လည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လမ်းသွားလမ်းလာသံမဏိအများပြည်သူဖို့အတွက် walkway အတွက်ဆန်ခါ, အနီးရှိစမ်းရေများနှင့်သစ်ပင်များအပေါ်အားကိုး။
ထို့အပြင်ဝါယာကြိုးအထည်သို့မဟုတ်ဟုခေါ်တွင်ဝါယာကြိုးကွက်, ဝါယာကြိုးထည်, ထိထိရောကျရောကမ္ဘာအနှံ့မရေမတွက်နိုင်အောင်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုနိုင်မယ့်စွယ်စုံသတ္တုထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှုဇုန်ကနေစီးပွားရေးအရအသုံးပြုမှုရန်, ဝါယာကြိုးကွက် နေ့တိုင်းအသုံးပြုတဲ့ဘုံသတ္တုထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အလူမီနီကွက်, ကြေးနီကွက်နှင့်ကြေးဝါကွက် လည်းကြေးဝါ, ပျော့သံမဏိ, Pre-သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိနှင့်သံမဏိပါဝင်သည်ကြောင့်ဝါယာကြိုးကွက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများစာရင်းကိုအကြားရှိပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီပစ္စည်းအမျိုးအစားဖော်ပြချက်ကြည့်ရှုရန် မရရှိနိုင်, အောက်ကကြေးနန်း mesh ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ PDF ကို click လုပ်ပါ။
ဂဟေဝါယာကြိုးကွက် welded ဝါယာကြိုးကွက် perpendicular ဝါယာကြိုး strands ပါဝင်ပါသည် တစ်ဦးချင်းစီလမ်းဆုံမှာ welded ရှိကြ၏။ စီးပွားရေးနှင့်စွယ်စုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ welded ဝါယာကြိုးကွက် မှာစင်ကြယ်သောရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်ယူနီဖောင်းဇယားကွက်ပုံစံများရှိပါတယ်။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတားအဆီးတွေ, လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး, သိုလှောင်မှုကွန်တိန်နာ, လေးလံသောဝန်နှင့်တိရစ္ဆာန်ခွေးဂေဟာများနှင့်အိတ်များအဘို့အားဖြည့်အဖြစ် applications များ။
စတိုင်ဝါယာကြိုးကွက်, ယက် ယက်န်ဆောင်မှုဝါယာကြိုးတက်ကွက်ယက်အမျှ၏ရက်ကန်း ons, ရက်-အထည်အလိပ်၏အမျှတစ်ဦးကအလားတူဖက်ရှင်ခုနှစ်တွင်ဖန်ဆင်းသည်ကမျိုးကိုရက်-အပေါ်ရန်တပတ်ရစ်အဝတ်အထည် Are ဒါကလုပ်ပါသည်။ ယက်ဖန်တီးရန်အသုံးပြုအသုံးအများဆုံးပစ္စည်းများ ဝါယာကြိုးကွက်ကာဗွန်သံမဏိ, သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိနှင့်သံမဏိပါဝင်သည်။
PVC coated ဝါယာကြိုးကွက် PVC အပေါ်ယံပိုင်း, ကုန်ကျစရိတ်အတွက်အတော်လေးနိမ့်သည် ဒဏ်ခံ, ချေးခံနိုင်ရည်နှင့်ကောင်းမွန်သောလျှပ်ကာသတ္တိလည်းရှိတယ်။ ကျနော်တို့အများကြီးအတွက် PVC coated ဝါယာကြိုးကွက်သယ်ဆောင် ကာဗွန်သံမဏိနှင့်သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိအပါအဝင်ပစ္စည်းများ။
mesh, လှောင်အိမ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကျွန်ုပ်တို့၏တက် Dimensional မှန်ကန်သောသည် Uniform COUNT ဦးလှောင်အိမ် mesh တက် mesh ညီထိုအကေ့ပေး။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးမတိုင်မီအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးအတွက်လှောင်အိမ်ကွက်သိုလှောင် welding နှင့်စတုရန်းနှင့်စတုဂံနှစ်ခုလုံးကိုအဖွင့်နှင့်အတူ welding ပြီးနောက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး။
စတိုင်ဝါယာကြိုးကွက်, အဝတ်အထည်ခန်းမသည့်ဟာ့ဒ်ဝဲ သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲအဝတ်ကွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဝါယာကြိုးန်ဆောင်မှုဝါယာကြိုးတက်ဖြစ်စေ Is တစ်ဦးကရင်ပြင်ထဲမှာယက် Wired ပါဝင်ပါသည်, welded သို့မဟုတ် Rectangular Grid Add သို့မဟုတ် Add ဒါကကွက်။ ဒါဟာသွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ, stainless အတွက်ရရှိနိုင် သံမဏိနှင့်ရှင်းလင်းသောသံမဏိနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပြင်ပဟာ့ဒ်ဝဲအထည် application များအတွက်အသုံးပြုသည်။
hex ခွငျထော hex ခွငျထောတစ်လိမ်သံမဏိဝါယာကြိုးကွက်ဖြစ်ပါတယ် ဆဋ္ဌဂံအဖွင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ hex ခွငျထောနှစ်ခုကွက်များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် width နဲ့အရှည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအရွယ်အစား။ ဒါဟာအသုံးများနှင့်စွယ်စုံကွက်ဖြစ်ပါတယ် မကြာခဏကြက်သား Coop သို့မဟုတ်ကြက်သို့မဟုတ်အခြားတိရစ္ဆာန်များအဘို့ကိုအခြားဝါယာကြိုးခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်ဖို့အသုံးပြုခြံစည်းရိုး။
အဆိုပါ stainless ၏သံမဏိရဲ့စိစစ်မှုများ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုဝါယာကြိုးတက်သံမဏိစိစစ်မှုများင့်ခြင်းအားဖြင့်ပေးထက်သေးငယ်တောင်းဆိုဒါက Applications ကိုအမျိုးမျိုးခုနှစ်တွင်အသုံးဝင်သော Are သံမဏိကိစ္စတွင် mesh, သတ္တု perforated, သတ္တုသို့မဟုတ် Standard န်ဆောင်မှု Add ဝါယာကြိုးတက်ကွက် Expanded ။ stainless ကွက်များတွင်အသုံးပြု filtration များအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောဂျက်အင်ဂျင်ချောဆီကိုသို့မဟုတ် filters High-ဖိအားဟိုက်ဒရောလစ် filter များအဖြစ်ဆိုးရွားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ, ။
သံမဏိမျက်နှာပြင် ဗိသုကာ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းများအတွက်ဿုံတော်ပါတယ် နှင့် functional ရည်ရွယ်ချက်များ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သံမဏိမျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါရေနံ, ဓာတု, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, သတ္တုတွင်း, အာကာသ, စက္ကူပြုလုပ်ခြင်း, အီလက်ထရောနစ်, သတ္တု, အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံး stainless ကွက်အသုံးချရန်။
Fencing လုံခြုံရေး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုးအကျဉ်းထောင်သည်အဆိုပါစံပြဖြေရှင်းချက် Is နယ်ခြားမဲ့သို့မဟုတ်မြင့်မားသောလုံခြုံရေးဓားရေးပြိုင်ပွဲလိုအပ်တာလဲအတူမဆို Facility ထည့်ပါ။ အဆိုပါကွက်အကွာတောင်တက်တားဆီးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် , ထိုသို့ပတ်လည်အတိုင်းအတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏မြင့်မားပေးခြင်း, သာမန်လက် tools များအားဖြင့် penetration ခုခံကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
ဝါယာကြိုးကွက်ကွန်တိန်နာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝါယာကြိုးကွက်ကွန်တိန်နာဒီဇိုင်းရေးဆွဲတည်ဆောက်နေကြသည် ပစ္စည်းကိုင်တွယ်ခြင်းအဘို့ထိုသူတို့စုံလင်သောအောင်, ကြမ်းတမ်းရှည်လျားဝန်ဆောင်မှုအသက်အဘို့။ သူတို့ကအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်ပါ နှင့်စွမ်းရည်။ Stackable နှင့်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သံချေး-ခံနိုင်ရည် သွပ်ရည်စိမ်ဝါယာကြိုးကွက်ကွန်တိန်နာအကြမ်းခံ, ခရီးဆောင်, Self-သန့်ရှင်းရေးနှင့် shippable ဖြစ်ကြသည်။
ဗိသုကာအဖြစ်စတိုင်ဝါယာကြိုးကွက်, တက်ဗိသုကာန်ဆောင်မှုဝါယာကြိုးအဖြစ်ကွက်ပဲမဆိုအစည်းအဝေးစီမံကိန်းကိုအကြောင်းအသုံးပြုမှုများတွင်များအတွက် Adapted ခံရနိုင်သလားဗိသုကာန့်သတ်ချက်ကဖော်ပြခဲ့သည်ပြီးတော့လိုင်းကာဗွန်သံမဏိ, သံမဏိကိစ္စတွင်ရှိနိုင် Is, သံမဏိနှင့်သံမဏိအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး။ ဒါဟာဒီကဗျာပို့ခြင်းဖြင့်ဗေဒနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေါင်းစပ် , တိုးမြှင့်နှစ်သိမ့်, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာအမြင်အာရုံအယူခံဝင်။
ဦး-Edging ဦး-Edging တစ်ဝါယာကြိုးကွက်ထုတ်ကုန် အနားပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ဘေးကင်းအောင်နေတဲ့ဝါယာကြိုးကွက်ထုတ်ကုန်စာရွက်၏အစွန်းမှပူးတွဲပါတစ်ဦး-shaped ချွတ်ကြောင်းဆက်စပ်ပစ္စည်း။ ဒါဟာကာဗွန်သံမဏိ, သံမဏိ, လူမီနီယံနှင့်သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိအတွင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
Grating_Manhole_Expert | ထုတ်လုပ်သူလက္ကား – လက်လီ | စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်အရောင်း, ကုန်သည် ,, အဆိုပါအေးဂျင့်ခြင်း, ဖြန့်ဖြူး
CHANCON COMPANYSelect LIMITED, |, Ltd. GratingThai Co. , 199 Soi 21/1 ကူးရာမှာ || (ရုံးဌာနမှူး, ဆန့်ကျင်ဘက်ဗဟို Rama 2) ။ SMD Thian, ဘန်ကောက်, ထိုင်းထိုင်းဘန်ကောက်ဘန်ကောက်
အဆိုပါလိုင်း @: @iCHANCON အဆိုပါလိုင်း။ (ID ဖြစ်ပါတယ်): ICHANCON
အမေရိကန်ဝက်ဘ်ဆိုက်: Www.chancon.co.th , Http://GratingThai.com, Http://GratingThai.co.th သည် http: ။ // ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် – ဦးထုပ်သံမဏိပိုက်ထုပ် pitting အဆိုပါ .com
FaceBook အပေါ်: Www.facebook ။ အဆိုပါ .com / GratingThai, Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover